That's so good, right?: August 2016
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂေးဖြစ်မှန်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? (Part I)
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာဆိုတာ သေသေချာချာဆန်းစစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သော်လည်း ကိုယ်ပတ်သက်တွေ့ကြုံမိတဲ့ အတွေ့အကြုံများအရ ကိုယ့်လိင်ကိစ္စတိမ်းညွှတ်မှုကဘာဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အသားမကျ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ထင်မြင်သိရှိမိတဲ့ သတ်မှတ်ချက် များအရပေါ့လေ။ ဒီနေရာမှာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့မေးခွန်းတွေထုတ်ပြီး ခေါင်းမရှုပ်စေချင်သလို စာဖတ်သူရဲ့ အတိတ်သမိုင်းနဲ့ ခံစားချက်တွေ ကို ယုံကြည်အားအထားရဆုံး နည်းလမ်းတွေနဲ့တန်းမညှိချင်ပေမဲ့ ဘယ်လိုတွေးတောဆန်းစစ်ကြံဆလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောပြချင်ပါ တယ်။ အောက်မှာရေးပြသွားမှာတွေကတော့ စာဖတ်သူရဲ့လိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပုံဖမ်းလို့ရအောင် အကူအညီပေးမယ့် သတင်းအချက် အလက်အချို့ဖြစ်ပါမယ်။
ခြွင်းချက်။ ။ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား(gay)၊ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီး(Lesbian) ၊ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးလုံးကြိုက်နှစ်သက်သူ (bisexual) ၊ လိင်ဝိသေသမရွေးကြိုက်နှစ်သက်သူ (pansexual) သို့မဟုတ် အခြားအမျိုးအစားပုံစံအခြေအနေများ ဟုတ်သလား မဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ လိင်တူခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်မက်မှုမျိုးရှိသူ (homosexuality) နဲ့ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးလုံးကို တပ်မက်စိတ်ရှိသူ (bisexuality) ပုံစံအစုံရဲ့ သဘောသဘာဝတွေကိုပြောပြပြီး နည်းပေးလမ်းပြပါမယ်။
ဒါလေးတွေလုပ်ရုံနဲ့ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား သို့မဟုတ် လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီးလို့မဆိုနိုင်ပါ
(Things That Don't Mean You're Gay or Lesbian)
(၁) အမျိုးသားတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် အမျိုးတူလူတစ်ယောက်ယောက်အကြောင်း စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်မက်နေမိရုံ လေထဲတိုက်အိမ် ဆောက်နေရုံနဲ့ စာဖတ်သူဟာ လိင်တူကြိုက် ဂေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ မဆိုလိုကြောင်းသဘောပေါက်ထားရပါမယ်။ လိင်ကွဲကြိုက် နှစ်သက်သူတွေဟာလည်း မကြာခဏဆိုသလို “လိင်တူ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေ” ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ လိင်တူခြင်း အတွေ့အကြုံယူမိတဲ့ ထူးဆန်းသောအိပ်မက်တစ်ခုမက်မိတာမျိုး သို့မဟုတ် အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ အ၀တ်လဲခန်းထဲမယ် အခြား အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို အနမ်းပေးရရင်ဘယ်လိုနေမလဲ သိချင်စိတ်ဝင်မိတာမျိုးတွေပေါ့။ စိတ်ကူးယဉ်မိနေခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ကူးနဲ့ရူး နေမိခြင်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆိုပါအကြောင်းအရာတွေဟာ စိတ်ကူးတွေကိုကျော်လွန်ပြီး လက်တွေ့ဖြစ်လာမယ့်အချက်တွေလို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ဘယ်လိုပြောရမလဲ လိင်တူအုပ်စုတစ်ခုမှာ အများအားဖြင့် သြဇာအာဏာလွှမ်းနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်အကြောင်းကို အခြားအုပ်စုဝင် တွေက အမြဲလိုလို လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်စိတ်ကူးယဉ် အားကျနေတတ်ကြတာသဘာဝဆိုပေမဲ့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ မျိုးတူလိင်တူ တစ်ယောက်ယောက်အကြောင်း မကြာခဏဆိုသလို စိတ်ထဲပေါ်လာတတ် စိတ်ကူးယဉ်သာယာတတ်နေပြီဆိုပါလျှင် မိမိရဲ့ လိင်စိတ် တိမ်းညွှတ်မှုကို ဆန်းစစ်ဖို့သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်လို လိင်တူအုပ်စုအ၀န်းအ၀ိုင်းအကြောင်းကိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်သာယာနေတတ်ပြီး လိင်ကွဲ အုပ်စုအကြောင်း စိတ်ကူးသာယာမှု နည်းတယ် သို့မဟုတ် စဉ်းကိုမစဉ်းစားဘူးဆိုပါက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရော လိင်တူနဲ့ရော အတွေ့အကြုံစမ်းသပ်မှုရှာကြံဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုခုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါလားကိုယ်ဟာဘာလဲဆိုတာသိဖို့လေ။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ မိမိဟာဘာဆိုတာသေချာဖို့ အသေအချာစမ်းသပ်ကြည့်မှဖြစ်မယ်လို့တော့ မမှတ်ထားသင့်ဘူးနော်။
(၂) လိင်တူတစ်ယောက်နဲ့ အမှတ်မထင်လိင်သာယာမှုတစ်ခုခုပြုလုပ်မိခဲ့တယ်ဆိုတိုင်း စာဖတ်သူဟာ ဂေးဖြစ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ကြောင်း နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ စီးကရက်တစ်လိပ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်ဖွာနေခဲ့သူကို ဆေးလိပ်သောက်သူတစ်ယောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ မရဘူးလေ။ အိုး…လူတွေအတော်များများပြောတတ်ကြတာက စီးကရက်တစ်လိပ်ကို တစ်ကြိမ်တခါဖွာမိရုံနဲ့ဆေးလိပ်သောက်သူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားမှာတဲ့။ စီးကရက်တစ်ချက်ဖွာရုံနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်သူ ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်သွားမယ်ပေါ့။ သူတို့ပြောနေတာတွေကို နားထောင်မနေ ပါနဲ့။ ဆေးလိပ်သောက်သူတစ်ယောက်၊ လိင်တူကြိုက်သူတစ်ယောက် သို့မဟုတ် လိင်ကွဲကိုနှစ်သက်သူတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုသမိုင်း အား ဘယ်ဟာတွေကလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာ သေချာတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါသလား။ ထားပါဦး အဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုသမိုင်းကရော စာဖတ်သူ အနာဂတ်ကိုဟောကိန်းထုတ်နိုင်တဲ့အရာတွေဟုတ်လို့လား။
နားလည်ထားရမှာက တစ်ခါတလေ စာဖတ်သူဟာကြားအခြေအနေမှာရောက်နေနိုင်ပါတယ်။ လိင်ကွဲတွေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ မမျှော်လင့်ဘဲ ပတ်သက်မှုတွေ တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့သာယာခဲ့တဲ့ လူအများစုဟာ များမကြာခင်မှာဘဲ လိင်တူကြိုက်နှစ်သူများဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ တယ်ဆိုရင် အံသြနေမလားဗျ။ လိင်ကွဲတွေကိုပဲကြိုက်နှစ်သက်သူအများစုဟာလည်း လိင်တူအမျိုးသား သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ကာ သိချင်စူးစမ်းစိတ် ဒါမှမဟုတ် စွဲလမ်းမှုတွေရဲ့အခြေအနေကို ဆန်းစစ်ဖူးခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါသေးတယ်။ တစ်ညတာ ပတ်သက်မှုဟာ စာဖတ်သူရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု ဘာလို့သက်သေခံလို့မရပါဘူး။
ထို့အတူပါပဲ စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုတစ်ခုဟာ အကန့်အကန့်ရှိသော ဦးနှောက်ကို မီးခလုပ်တစ်ခုဖွင့်ပိတ်လိုက်သလို အရာရာမှာ ဘယ်လိုခံစားကြိုက်နှစ်သက်နေမှုအပါအ၀င် ပြောင်းလဲမသွားစေဘူးဆိုတာသိထားရပါမယ်။ စာဖတ်သူက ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစား ကောင်းကြိုးစားမိခဲ့ပေမယ့် သိပ်ပြီးအောင်မြင်ပြီးမြောက်တဲ့ အခွင့်အလမ်းမဟုတ်ခဲ့ဘူး မဟုတ်လား။ လိင်တူကြိုက်နှစ်သက်သူဆိုတာ ဘယ်လို လိင်ကွဲကိုပဲကြိုက်နှစ်သက်သူဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုတဲ့ ဖော်ထုတ်နိုင်မှု ဥပဒေတွေ သတ်မှတ်ချက်တွေက ခိုင်မြဲနေတယ်လို့ အာမခံ မပေးနိုင်ဘူးလေ။ လိင်မှုကိစ္စဆိုတာ ပျော်ရည်တစ်ခုလိုပါပဲ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အဖြစ်ပြောင်းလဲထားသူ (Transgender) တွေကိုယ်တိုင် ကိုက မိမိဟာ လိင်တူကိုပဲကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ကြောင်း ဂေးဖြစ်ကြောင်း အစဦးတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ပြောရပါမယ်။
တကယ်လို့ စာဖတ်သူဟာ မိမိလိုပဲလိင်တူတစ်ယောက်နဲ့ အမှတ်မထင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုပတ်သက်ခဲ့ပြီးနောက် စိုးရိမ်သောကတွေ သို့မဟုတ် အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နေမထိထိုင်မသာ ခံစားနေရတယ်ဆိုပါက သေချာသလောက်ကတော့ သူတို့ဟာ စာဖတ်သူအတွက် လူမှန်နေရာမှန် မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလူဟာ ငါ့အတွက် လူမှန်မဟုတ်လောက်ဘူးဆိုပြီး စာဖတ်သူသိမြင်ထားတဲ့ အချက်အလက်များနဲ့ တွေး ဆချိန်ရွယ်ကာ မိမိလိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကိစ္စကို ကျင်လည်ရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အသားတကျဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း၊ ငြင်း ဆန်ဖို့လုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကိုအလောသုံးဆယ်မလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်နည်းနည်းယူဖို့လိုပါတယ်။
(၃) တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်ပြောင်းလဲထားသူ (transsexual) သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အသွင်ပြောင်းလဲနေထိုင်သူ(trangender) ဖြစ်နေခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ထားရပါမယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အသွင်ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်သူများဟာ လိင်တူကြိုက် နှစ်သက်သူ (homosexuals)များထက် ပိုမိုသေးငယ်တဲ့အုပ်စုလေးတစ်ခုအသွင်ဆောင်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းတဲ့ သဘောထားတွေ ပြီးတော့ နားလည်ပေးရန်ခက်ခဲခြင်းတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတို့တွေဟာ များသောအားဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အသွင်းပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ထားသောအမျိုးသမီး (အမျိုးသားတစ်ယောက်အဖြစ် မွေးဖွားလာသူ) တစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံအချို့ကို ကြားဖူးကောင်းကြားဖူးမယ် သို့မဟုတ် သူတို့တွေနဲ့စကားပြောဆိုဆက်ဆံဖူးပါလိမ့် မယ်။ Trans အမျိုးသမီးတွေဟာလည်း မြင်ဖူးတွေ့ဖူးနေကြအခြားသော အမျိုးသမီးများအတိုင်းပါပဲ။ စာဖတ်သူဟာ အမျိုးသားတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး Trans အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အပေါ်စွဲလမ်းချစ်ခင်မိတယ်ဆိုတာနဲ့ ဂေးတစ်ယောက်လို့ မဆိုလိုနိုင်ပါဘူး။ အမှန်ပြောရရင် စာဖတ်သူ အနေနဲ့ တွေ့ဆုံသဘောကျမိသူဟာ trans အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လို့ သိချင်မှသိမှာကိုး။ Trans လူအများစုဟာ သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ ပုံပန်း သွင်ပြင်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ ဖြတ်သန်းဆဲကြားကာလအခြေအနေတစ်ရပ် ကြားလူ (cisgender)ပုံစံအနေအထားမှာ စာရေးသူတို့တွေ့မြင်ကြရတာ များမယ်နဲ့တူတယ်။ အဲ အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် မိန်းမပုံစင်စစ်မဖြစ်သေးသော ယောက်ျားပုံလည်းမပျောက်သေးသော လူတစ်ယောက်ပုံစံ မျိုးပေါ့နော်။
အခြားတစ်ဘက်ကပြောရရင် စာဖတ်သူအနေနဲ့ အမျိုးသားဗီဇလက္ခဏာမပျောက်ပျက်သေးသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အပေါ် စွဲလမ်းစိတ် ၀င်နေကြောင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆန်းစစ်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ စာဖတ်သူရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စမှာ အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုခုဖွင့်ဆိုနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို လိင်တူခြင်းသဘောကျနှစ်သက်သူ (homosexual) ဒါမှမဟုတ် လိင်တူလိင်ကွဲ နှစ်မျိုး စလုံးကိုနှစ်သက်သူ (bisexual) ဖြစ်လာအောင် လမ်းကြောင်းပေးနေတဲ့အချက်အလက်တွေလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ စာဖတ်သူဟာ လိင်တူလိင်ကွဲ မရွေးနှစ်သက်တတ်သူ (polysexual or pansexual) ဖြစ်နေနိုင်တာပါပဲ။ စာဖတ်သူအနေနဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကိစ္စကို သုတေသနလုပ် ဆန်းစစ်ကြည့် ပြီးပြီလား? ဖိုမလက္ခဏာ နှင့် လိင်ဝိသေသအထောက်အထားများ တစ်ရာကျော်ရှိနေပါတယ်။ အခုအခြေအနေအချိန်အခါမှာ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ခေါင်းရှုပ်စိတ်ရှုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သင်ကြားလေ့လာလိုက်ပါဦး။
ယောက်ျားဆန်ခြင်း မိန်းမဆန်ခြင်းနှစ်ခုကြား ကွဲပြားခြားနားချက်တွေကို စိတ်ထဲမှာပဲထားပါ။ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားဖြစ်မှု မိန်းမဖြစ်မှု လိင်ဝိသေသရဲ့ ထင်ရှားသောအမူအကျင့်များကိုပေါ့။ လိင်ဝိသေသလက္ခဏာဆိုတာ တော်တော့်ကို ရှုပ်ထွေးပွေလီလွန်းပါတယ်။ စာဖတ်သူ ဟာ ယောက်ျားပိုဆန်တဲ့အမျိုးသမီး သို့မဟုတ် မိန်းမပိုဆန်နေတဲ့ယောက်ျားနဲ့ တူနေခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း အဲ့သည့်အကြောင်းအရာက စာဖတ်သူရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်မက်မှု ရည်ညွှန်းချက်အဖြစ် သေချာပေါက် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့မရပါဘူး။ တကယ်တန်းတော့ ယောက်ျား ဖြစ်မှု မိန်းမဖြစ်မှု လိင်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ အစဉ်အလာအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဒါမှမဟုတ် ဇီဝဗေဒနည်းအားဖြင့်လည်းကောင်း သိသာထင်ရှားမှု တစ်ခုခုကြောင့် စွဲလမ်းတွယ်ငြိမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုသော်လည်း အရပ်ခပ်မြင့်မြင့် မေးရိုးကားကားအမျိုးသမီးထွားထွားတွေ ရှိလာနေသလို ဆံပင်ရှည်ရှည် နုနုညံ့ညံ့နေတတ်သော အမျိုးသားများလည်းရှိနေတတ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုများဆုံးဖြတ်ကြမလဲ။
စာဖတ်သူ/စာဖတ်သူတို့ကို ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အဖြစ်ခွဲစိတ်ပြုပြင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့ ၀န်ခံထားသူ Trans တစ်ယောက်ဖြင့် လိင်မတူပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ရပ် (heterosexual relationship)အနေနဲ့ထူထောင်ထားမိတယ်ဆိုလျှင်လည်း စာဖတ်သူဟာ ဂေးဖြစ်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ခွဲစိတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဖြစ်စဉ်တလျှောက်မှာလည်း သူတို့အပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွယ်ငြိ စွဲလမ်းမှု ရှိနေဆဲ သို့မဟုတ် မရှိတော့ဘဲ အတူတကွနေထိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုပါလျှင်တော့ စာဖတ်သူဟာ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးစလုံးကိုချစ်ခင်နှစ်သက် တတ်သူဖြစ်နေမလား(bisexual) ဖော်ထုတ်သင့်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ချစ်ခင်စွဲလမ်းတွယ်ငြိမှုဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွယ်ငြိမှုနဲ့ ထပ်တူမတူညီပါဘူး။ ချစ်ခင်စွဲလမ်းတွယ်ငြိမှုဆိုတာက လိင်ခွဲစိတ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်ဖြစ်ပါစေ လိင်ခွဲစိတ်မပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေ ဆက်လက်ချစ်ခင်စွဲလမ်းနေမှု ဖြစ်ပြီး ခွဲစိတ်တာ မခွဲစိတ်တာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တစ်ရပ်ထူထောင်ထားသူကို လိင်ပြောင်းလဲခွဲစိတ်မှုမလုပ်စေချင်ပေမဲ့ အဆိုပါလူက ခွဲစိတ်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုပါလျှင် ဆက်လက်အတူ နေထိုင်ပြီး ချစ်ခင်သွားဖို့ဆိုတာ ပြောဖို့ တော်တော်ခက်ပါတယ်။
(၄) ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို မကြိုက်နှစ်သက်တတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ စာဖတ်သူဟာ လိင်တူကြိုက်နှစ်သက်သူမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း နားလည် ထားရပါမယ်။ စာဖတ်သူအနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွယ်ငြိစွဲလမ်းမှု အတွေ့အကြုံမရှိသူ သို့မဟုတ် လိင်ကိစ္စ အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုလုံးဝမရှိသူ လိင်မှုကင်းသောသူ (asexual – ace) တစ်ယောက်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန် စွဲလမ်းတွယ်ငြိမှု ဆိုတဲ့ အရှိန်အ၀ါလည်းမရှိဘူး သို့မဟုတ် ဒိတ်တင်လုပ်တာကို စိတ်ဝင်စားခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းအရာများနဲ့ဘောင်ခတ်ထား ခြင်းလည်း မရှိဘူးပေါ့။
Alex Aung (29 August 2016)
အော်လန်ဒိုဂေး ကလပ်က သေနတ်သံများ
ဂျပန်တစ်ယောက်က ဘရာဇီးတစ်ယောက်လို နေချင်ပါတယ်ဆိုရင် သူ့ကိုဘာပြောမလဲ
သေဆုံး ၄၉၊ ဒဏ်ရာရ ၅၃ ပါတဲ့ အမေရိကန်မှာ။
ဂေးတွေက အစိုးရလုပ်ပြီး ပြည်သူကိုမလိမ်ဘူး
ဂေးတွေက ဗုဒ္ဓ၊ ယေရှု၊ အလ်္လာတို့ကိုမဆန့်ကျင်ခဲ့ဘူး။
လူဟာ လူပါပဲ (ရုပ်၊ နာမ်အစုအဝေးပါပဲ)
စိတ်နဲ့ ခန္ဓာဆိုတာ အမြဲထပ်တူကျမယ်လို့
Note:ခေတ်ရနံ့မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် (၂၈) သြဂုတ်လ ၂၀၁၆ ထုတ်မှ ကဗျာဆရာစုမောင်မောင်၏ ကဗျာကို ဖော်ပြပေးပါလိုက်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 11:34 AM No comments:
How I Learned To Masturbate (Part Three)
လက်သမားအတတ်ဘယ်လိုတတ်သလဲ (အပိုင်း သုံး)
လူတွေအနေနဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်ကာလမှာ လိင်ကိစ္စအကြောင်းကို ဘယ်လိုစတင်တွေ့ရှိသိမြင်ခဲ့သလဲဆိုတာ အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ခင်မင်မိသော လူအချို့ကတော့ သူတို့ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြင်ပွင့်လင်းလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဇာတ်ကြောင်းတွေကို သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုမှုနဲ့အတူ အမည်ပြောင်းလဲရေးသားပြီး ကျနော် ပြန်လည် ရေးသားပြပါမယ်။ အကြောင်းအရာ ပတ်ဝန်းကျင် မနီးရိုးစွဲတူညီမှုကင်းတဲ့ လူတွေကိုရွေးချယ်ပြီး သူတို့ဘယ်လိုများ လိင် အာသာဖြေတဲ့ကိစ္စကို တွေ့ရှိတတ်မြောက်ခဲ့သလဲဆိုတာ ဖော်ပြမှာပေါ့နော်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ပြန်ပြောင်းတွေးတော အမှတ်တရမှုအကြောင်းအရာများဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးသက်သက်မဟုတ်သလို ပြင်ဆင်တန်ဆာဆင်ထားချက်များမပါဝင်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ပြန်ပြောင်း အမှတ်ရမှုများအပေါ် များသောအားဖြင့် သူတို့စကားလုံးတွေအတိုင်းပြန်လည်ဖော်ပြရေးသားနိုင်ဖို့ ကျနော်ကြိုးစားထားချက် များဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
"တော်တော်ခက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါပဲဗျာ။ သေတော့မသေချာဘူး…ဒါပေမဲ့ ကျနော့်ဖာသာ လိင်တံကိုကိုင်ပြီးကစားနေတတ်တာက လေးနှစ် ဒါမှမဟုတ် ငါးနှစ်လောက် ခပ်စောစောအရွယ်ကတည်းကဖြစ်မယ်။ အကြောင်းပြချက်ကိုပြောရရင်တော့ အိမ်မှာမနေရဘဲ နေ့ကလေးထိန်းစင်တာတစ်ခုမှာ နေရလေ့ရှိတာ၊ တစ်ခါတရံ ကျနော်တို့တွေအပြင်ကိုထွက်ကစားရမယ့်အချိန်ဆိုရင် အ၀တ်အစားတွေ ကိုလဲလှယ်ကြရတယ်လေ။ ကျနော်မှတ်မိတယ် အ၀တ်မ၀တ်ဘဲနေရတာသဘောကျတဲ့ ဒေးဒေးဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို။ ကျနော်တို့အရွယ်ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတလေ အ၀တ်လဲချိန်ကြည့်မိလိုက်ရင် သူ့ငပဲလေးက မာပြီးတန်းနေရော။ ကျနော်တို့ကိုထိန်းပေးတဲ့ ၀န်ထမ်းတော့ မသိစေချင်ပေမယ့် သူ အ၀တ်မ၀တ်ချိန်မှာရော ၀တ်ပြီးချိန်မှာရော သူ့ကိုကြည့်နေရတာ ကျနော်သဘောကျတယ်။ သူလည်း အတူတူပဲဗျ ကျနော်အ၀တ်မ၀တ်တဲ့အချိန်ဆိုရင် ကျနော့်ငပဲကိုကြည့်ရတာကြိုက်ပုံပဲ။ အဲ့အချိန်က ကျနော့်ငပဲ မာမမာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ခပ်ပါးပါးအကျီတွေဝတ်လို့ အေးနေတဲ့အ၀တ်အစားတွေကနေ ခပ်နွေးနွေး ချည်သားအတွင်းခံဘောင်းဘီကို လျှိုဝတ် ရတာ အလန်းစားပေါ့။ ဘာကြောင့်မှန်းကိုမသိဘူးဗျာ ချည်သားအထည်စနဲ့ ကျနော့်အသားထိတွေ့ရတဲ့ ခံစားချက်ကိုသဘောကျတာ။ ကျနော်တို့တွေ တစ်ယောက်ငပဲကို တစ်ယောက်ကိုင်ပြီး မကစားကြပေမယ့် ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်ငပဲကိုယ်ကိုင်ကာ ကစားခဲ့တယ်လေ။
အဲ….ဘယ်အချိန် ပထမဆုံးအကြိမ် သုက်ရည်ထွက်တဲ့အထိ လုပ်မိခဲ့လဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားရရင် ခြောက်တန်းနှစ်ရဲ့ နွေရာသီကျောင်း ပိတ်ရက်မှာလို့ပြောရမယ်။ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှာမရှိချိန်ဆိုရင် အတွင်းခံဘောင်းဘီမ၀တ်ဘဲ ဘောင်းဘီတိုတို့ ရေကူးဝတ်စုံတို့ကို ၀တ်ထား လေ့ရှိပါတယ်။ ကျနော့်အထင် ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတဲ့ ကျနော့်ငပဲခေါင်းနဲ့ အဲ့ဒီဘောင်းဘီသားတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိနေရတာ ပိုရင်ခုန်မိ တယ်လို့ထင်တယ်ဗျ။ သူငယ်ချင်းကလဲ ကျနော်ခံစားရသလို ခံစားမိသလားမသိ တစ်ယောက်ငပဲ တစ်ယောက်ကိုပြဖို့ အကြောင်းပြချက် မလို အာရုံရနေကြပုံပေါက်နေတယ်။
ကျနော်နဲ့ သူငယ်ချင်း ဒေးဒေးတို့ ဆီးသွားဖို့ သန့်စင်ခန်းကိုအတူသွားကြပြီး ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတဲ့ တစ်ယောက်ငပဲ တစ်ယောက် ပြကြ ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ငပဲခေါင်းတစ်ခုလုံးက ခရမ်းရောင်သမ်းနေသလိုပဲ။ နှစ်ယောက်သားငပဲတွေက မမာ့ တမာ ဖြစ်နေကြပြီး ဟိုပြောသည်နောက် ဟာသတွေလုပ်မိကြသေးတယ်။ ဆီးသွားပြီးချိန်ကျတော့လည်း တစ်ယောက်ငပဲ တစ်ယောက် ပြန်ပြ ဖြစ်ကြကာ ဒေးဒေးငပဲက နှစ်စက္ကန့်အတွင်း မတ်လာရော။ သူ့ငပဲက အမြင်အရတော့ လေးလက်မလောက်ရှိမယ် ကျနော့်ဟာကရော အဲ့သလောက် ပါပဲ ပိုရှည်မနေဘူး။ သူ့ငပဲကို ဘောင်းဘီထဲပြန်မထည့်ခင်အချိန်အထိ detail အကုန် ကျနော်လိုက်ကြည့်ဖြစ်သေးတယ်။
အဲ့ဒီနေ့ မွန်းလွဲချိန်ရောက်တော့ အိမ်မှာ ကျနော် ကိုယ့်ငပဲကိုယ် ရေချိုးခန်းထဲမှာထုတ်ကြည့်ပြီးမှ ဆီးသွားဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ။ ဆီးသွားတာများ ငပဲက တ၀က်မာနေတော့ လက်နဲ့ထိန်းကိုင်ရတာ လက်တောင်ဆီးတစ်ချို့တ၀က်ပေတယ်လေ။ ရေချိုးခန်းနံရံကမှန်ထဲ ကိုယ့်ခန္ဓာကို ကိုယ် ၀စ်လစ်စလစ်နီးပါးမြင်ရတော့ စိတ်ထဲရှိန်းကနဲဖြစ်ရင်း ငပဲက အပေါ်ကို ၉၀ဒီဂရီနီးပါးမာတောင့်လာပါတယ်။ လက်ထဲမှာနွေးနေပြီး ကိုင်ရတာကောင်းလာတော့ လိင်အာသာဖြေတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆီးသွားတာသက်သက်ဆိုတော့ လိင်တံမှာဘာမှ စိုစွတ်မှုမရှိတာ ကြောင့် နည်းနည်းနာသလိုရှိပေမယ့် ကျနော့်လိင်တံကို တစ်စုံတစ်ခုသောလှိုင်းတွေမရိုက်ခတ်ခင်အချိန်ထိ လက်ကိုခပ်သွက်သွက် အလုပ်ပေးမိပါတယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို လိင်အာသာဖြေနေတာကိုရပ်တန့်လိုက်တယ်။ ကျနော့်ငပဲခေါင်းကို လက်ချောင်းလေး တွေနဲ့ထိကိုင်မိတိုင်း အလိုအလျောက်ပဲ လိင်အာသာဖြေတဲ့ခံစားမှုမျိုး ရမိတာပါ။
လိင်အာသာဖြေသလို လက်ကစားမှုမျိုးကို နောက်တစ်နေ့မှာ ထပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ကြိုးစားကြည့်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ထဲတစ်မျိုး တစ်မည်ဖြစ်လာရင် ရပ်တန့်ပစ်လိုက်တာပါပဲ။ ရက်သတ္တပါတ် နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ဘိုဘိုရဲ့ပြောစကားနဲ့ ကျနေ်ာ့စိတ်ထဲက မတင်မကျဖြစ်နေမှုကိုအဆုံးသတ်မိပါတယ်။ သူကလည်းပြောတယ်ဗျ သူ့ငပဲကိုပွတ်သပ်တာ ပြီးတော့ကိုင်တာကြာရင် လည်း ကျနော်ပြောသလို လှိုင်းတခုခုရိုက်ခတ်လာသလိုခံစားပြီး ကတုန်ကယင်ဖြစ်မိတယ်တဲ့။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သား လူလစ် ချိန်ဆို အတူတူ ဟိုပွတ်သည်ပွတ် အကြိမ်အနည်းငယ်လောက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြကာ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာတော့ ဒေးဒေးလည်းလုပ်တယ် ပေါ့။
ကျနော်တို့တွေရဲ့ အိပ်ခန်းတွေထဲ ဒါမှမဟုတ် အိမ်နောက်ဖေးက သစ်ပင်အုပ်တွေထဲ ပုံမှန်လိုကိုလုပ်ဖြစ်ကြတယ်။ တစ်ယောက်မှတော့ ငပဲကနေ ဘာအရည်မှ ပန်းမထုတ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီနှစ်နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာတော့ အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူ ကွဲပြားပါတယ်။ ပေါက်တယ်ဟုတ်?
"ဟုတ်ပါပြီ….ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်တစ်ခုလို့ပဲပြောရမလားပဲ ကျနော် အသက် ၁၃နှစ်မပြည့်ခင်တုန်းက လိင်အာသာဖြေတာ လိင်ကိစ္စတွေးတာ လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဗျ။ နောက်ကျတယ်လို့ပြောရမယ်။ ကျနော်ဘာပြောမလဲဆိုတာ သဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်။ လိင်ကိစ္စကိုပြောရမှာ တောင် ရှက်စရာလို့ထင်ပြီး ငြိမ်နေတတ်ခဲ့တာလေ။ အဲ့ဒီ ရှက်စရာဆိုတဲ့ကိစ္စကို အိမ်နီးနားချင်း အကိုကြီးတစ်ယောက်က သင်ပေးခဲ့ တာဗျ။ သူ့အသက်က ၃၅နှစ်လောက်ရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ဒီထက်အသက်ကြီးတဲ့လူလို အိနြေ္ဒကြီးနဲ့ဆိုတော့ ရှိန်နေခဲ့တာပေါ့နော်။ အိမ်နီးချင်း ယောက်ျားလေးအတော်များများက ဒီလူကြီးရဲ့ သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုကို မခံဖူးတဲ့သူမရှိဘူးလို့ အတင်း ကြားဖူးတယ်။ ခပ်မိုက်မိုက်ငနဲအတော်များများဟာလည်း ဒီလူကြီးရဲ့ blowjob လုပ်ပေးခြင်းမှာ ကျဆုံးသွားတာအများကြီးပဲတဲ့။ ကျနော်တော့ မဟုတ်ဘူးနော်။
လူပျိုဖော်ဝင်နောက်ကျတာဘာကြောင့်လဲတော့ ကျနော်မသိဘူးဗျ။ သေချာတာကတော့ အိမ်မှာလိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူမှ မဆွေးနွေး မပြောဆိုတတ်ကြဘူးလေ။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ရေးမထားပေမဲ့ လိုက်နာရသော စည်းကမ်းချက်များလိုပဲပေါ့။ ကျနော့် သူငယ်ချင်းတွေကလည်း စကားစပ်ပြီးတောင်မပြောခဲ့ကြဘူးဆိုတာ အခုမှပြန်တွေးမိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲတော့မပြောတတ်ဘူး။ မူလတန်းကျောင်းတက်ခဲ့စဉ်တလျောက်မှာလဲ ဘာသာရေးအအုပ်အထိန်းမကင်းတဲ့ကျောင်းမှာတက်ခဲ့ရတာကြောင့် ဘယ်သူ့ဆီကမှ လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မကြားခဲ့ရပါဘူး။ မကြာခင်မှာတော့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းအချို့က လိင်အာသာဖြေမှုကိစ္စကိုပြုလုပ်တတ် ပြုလုပ် ကြပြီးကြောင်းသိလာရပါတယ်။
အိမ်နံဘေးက ဘဲကြီးကို ကျနော်ဘယ်လိုစကားစပြောမိသလဲ အတိအကျမမှတ်မိဘူးဗျ။ မှတ်မိသလောက်ကတော့ ကျောင်းတက်ချိန်ပြီး လို့ မုန့်ပဲသွားရေစာတွေဝယ်ပြီ ပြန်လာချိန်မှာ သူစကားစပြောတယ်ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ လိင်အသားပေးရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးလား ကျနော့်ကိုမေးတာမှာ မကြည့်ဖူးဘူးလို့ဖြေခဲ့တယ်လေ။ အနည်းဆုံးတော့ အဲ့သလိုရုပ်ရှင်တွေက ဘယ်လိုမျိုးလည်းသိချင်စိတ်ဝင်ခဲ့တယ် ထင်တယ်။ သူက “မင်း တစ်ကားလောက်မကြည့်ချင်ဘူးလား?’ တဲ့ မေးတယ်။ ကျနော်ကလည်း မငြင်းပါဘူး “ကြည့်ချင်တယ်ဗျ” လို့ဖြေမိ ရော။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သား သူ့အိမ်ကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့အခန်းထဲရောက်တော့ တီဗီခပ်ကြီးကြီးတစ်လုံးရယ်၊ ဈေးခပ်ကြီးကြီး ပေးရလောက်တဲ့ VCR တစ်လုံးရယ် ခန့်ခန့်သန့်သန့် စဉ်နဲ့တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့အချိန်တုန်းက ကျနော်တို့အိမ်မှာတောင် VCR တစ်လုံးမ၀ယ်နိုင်သေးပါဘူး ဈေးကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ခဏခဏ လိင်အာသာဖြေ(-ွင်းထု)သလားလို့မေးတော့ သူဘာပြောနေ မှန်း ကျနော်မသိဘူးလို့ဖြေလိုက်ရော။ သူက ‘ကောင်လေး…မင်းကိုတစ်ခါလောက်ပြုစုပေးမယ် ကြိုက်လား”လို့ပြောသဗျ။
ကျနော်ဝတ်ထားတဲ့အ၀တ်အစားတွေအကုန်ချွတ်ပြီး အိပ်ရာပေါ်ကိုလှဲလိုက်ဖို့ သူက ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့ ကျနော်နည်းနည်းလန့်သွား မိတယ်။ သူကတော့“ငါ့ကိုယုံစမ်းပါ ကောင်လေးရာ….မင်းသဘောကျမှာပါ” လို့လှမ်းပြောလိုက်ရင်း တိတ်ခွေတစ်ခုကို စက်ထဲထည့်လိုက် ပါတယ်။ အိုး…တီဗီမှာပေါ်လာတဲ့ အမျိုးသမီးက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်ဆိုတာတော့ ကျနော်သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ဘယ်လို ပြောရမှန်း မသိဘူး။ ဘဲကြီးက လိင်ဘယ်လိုဆက်ဆံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့်ငပဲကိုကိုင်ပြီး ဘယ်လိုကစား ဖြစ်သလဲ မေးပါတယ်။ ကျနော် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလို့ သူ့ကိုဖြေလိုက်တယ် အမှန်အကန်အတိအကျအဖြေတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
ကျနော့်ငပဲက အမြဲလိုလို မထိလိုက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ မာတောင့်နေတတ်တာပါ။ နံနက်ခင်းအိပ်ရာကနိုးချိန်ဆိုအရင်ဆုံး သတိပြုမိတာက ပေါင်ကြားငပဲက အရင်နိုးနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျနော်က အသက်သာငယ်တာ ငပဲကထွားတယ်ဗျ။ အသက် ၁၃နှစ်လောက်သာ ရှိသေး ပေမယ့် ၅လက်မအထက်မှာရှိတယ် မာတောင့်လာချိန်ဆိုရင်လေ။ သေးပေါက်ပြီးတာတောင်မှ ပြန်မကျဘဲ မတ်ထောင်နေတယ်ဆိုရင် ကျနော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဗျာမြားဘူးတယ်။ တစ်ခါတရံတော့ ရေအေးအေးနဲ့ချိုးပစ်လိုက်မိတယ်။ ဟုတ်တယ်….တကယ်ပြောတာဗျ မရယ်နဲ့။
အာ…ကျနော်က ကုတင်လို့ပြောရမလား ခုံတန်းလျားလို့ပြောရမလား အိပ်ရာခင်းနဲ့ခေါင်းအုံး ခင်းပြုထားတာပေါ်မှာတစ်ဝက်တပျက်လှဲ ရင်း တီဗီကိုကြည့်နေတာ ခပ်မြန်မြန်ဘဲ ပေါင်ကြားကငပဲကမတ်ထောင်လာပါတယ်။ အိမ်နီးနားခြင်း ဘဲကြီးက ဘယ်လိုလက်ကိုသုံးပြီး လိင်အာသာဖြေရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပါတယ်။ သူပြောတဲ့အတိုင်း ကျနော်လုပ်လိုက်တာ မိနစ်အနည်းငယ်လောက်အကြာမှာတော့ သေး ပေါက်ချင်သလိုလို ခံစားချက်က မတားနိုင်မဆီးနိုင်ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျနော်ဆက်မလုပ်ဘဲ ရပ်လိုက်ချိန်မှာတော့ အရည်ကြည်လေးတွေ တလျှော့ ငပဲခေါင်းထိပ်ကထွက်လာပါတယ်။ ဘဲကြီးက ကျနော်ထွက်တာနည်းနေသေးတယ် ဆက်လုပ်ကြည့်တဲ့။ ဘယ်လိုဇာတ်သိမ်း တယ် ဘယ်လိုအထွဋ်အထိပ်ရောက်တယ်လို့ သူပြောခဲ့တာကို ကျနော်ခပ်စောစောက သတိမမူမိခဲ့ပါဘူး။
ဒါနဲ့ ကျနော်ဆက်ပြီး လက်ကစားလိုက်တာ ငပဲကပြန်မတ်လာပြီး ခဏနေကလိုပဲ သေးပေါက်ချင်သလိုလို အိမ်သာတက်ချင်သလိုလိုစိတ် ကနိုးကြွလာပါတယ်။ ဘဲကြီးရဲ့ ဆက်လုပ် ဆက်လုပ်ဆိုတဲ့စကားသံတွေနဲ့အတူ ခံစားရတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကလည်း တိုးတိုးလာပါတယ်။ ပထမအကြိမ်လုပ်တုန်းကလိုပဲ ကပ္ပယ်အိတ်တွေက အပေါ်ကိုကပ်လာပြီး ရင်ထဲလျပ်ကနဲဖြစ်ကာ ဖြူပျစ်ပျစ်အရည်တွေ တလျှော့ပြီး တလျှော့ ပန်းထွက်ကုန်ပါတယ်။ လက်ကစားနေတာကိုရပ်လိုက်ကာ ကျနော့်ဗိုက်သားတွေပေါ်မှာ တင်နေတာတွေကို လက်နဲ့အသာပွတ် သပ်ကြည့်မိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်ဆီးခုံက အမွှေးနုတွေပေါ်မှာလဲ နည်းနည်းတင်နေတယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျ လိင်အာသာဖြေမှုသာ မလုပ်ခဲ့တာ ဆီးစပ်နဲ့ အချို့နေရာတွေမှာ အမွှေးနုလေးတွေ ခပ်စုစုရှိနေပါပြီ။ အရောင်တွေက ခပ်ဖြူဖြူနဲ့ဆိုတော့ ရပ်ထားတဲ့လက်ကို ခဏဆက် ကစားကြည့်တာ အရည်အနည်းငယ်အချို့တော့ထပ်ထွက်လာပါသေးတယ်။ မျက်လုံးကတော့ တီဗီမျက်နှာပြင်ကိုဆက်ကြည့်နေဖြစ် ပါတယ်။
ကျနော်လက်ကစားတာ စုစုပေါင်း ၁၅မိနစ်လောက်တော့ကြာတယ်ဗျ။ လိင်ဥတွေတောင် နည်းနည်းနာတယ်လို့ထင်မိတာကြောင့် ဆက်မလုပ်ဘဲ ကျနော်ရပ်လိုက်တယ်။ ကျနော်က တော်ပြီဆက်မလုပ်တော့ဘူးလိ်ု့ပြောတော့ ဘဲကြီးက တဘက်တစ်ထည်လက်ကမ်း ပေးပါတယ်။ ကျနော့် ဗိုက်သားအနှံ့ရယ် ငပဲခေါင်းမှာရယ် အများအပြားပေနေသော အရည်တွေကို အသေအချာသုတ်ဖယ်လိုက်တာ ပေါ့လေ။ ကုတင်ဘေးက စဉ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အ၀တ်တွေကို ကောက်ဝတ်လိုက်ပြီး ဘဲကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကာ အိမ်ပြန်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။
ဟာ….ဒါပေါ့ အခုတော့ လိင်အာသာဖြေ(-ွင်းထု)တဲ့အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိသွားပြီ။ တစ်ယောက်ထဲနေရချိန် ငပဲခေါင်းထောင် ထလာတိုင်း ဘယ်လိုဖြေလျော့ရမယ်ဆိုတာသိတော့ စလုပ်ပြီလေ။ မနက်ခင်း အိပ်ရာထချိန်တစ်ခါ…ကျောင်းထဲက အိမ်သာထဲမှာ တခါ လုပ်ဖြစ်တယ်။ တော်သေးတယ် အိမ်နားကဘဲကြီးက ဘယ်လိုဘယ်ဒင်းလုပ်ရတယ်ဆိုတာ သင်ပေးပြီး လုပ်လုပ်နေတာ ကျနော့်အမ မိတော့မလိုဖြစ်ရသေးတယ်။ ကျနော့်ဘော်ဒါတွေကို လက်ကစားတဲ့ကိစ္စဖွင့်ပြောမိပြန်တော့ သူတို့တွေကလည်း ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် ဘယ်သူကတော့ ဘယ်ဟာ စသဖြင့် အတွေ့အကြုံဖလှယ်ကြတာ နောက်ဆုံးတော့ ကျောင်းအိမ်သာထဲမြန်မြန်ပြေး လက်ကစားမိတာ ပေါ့ နောက်တစ်ကျော့။ တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက်တော့ အိမ်နီးနားခြင်းဘဲကြီးနဲ့အတူ ဒါမှမဟုတ် ဘော်ဒါထဲက အချို့နဲ့အတူတူ လက်ကစား ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ ကျနော့်အသက်အရွယ် ၁၅နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူများတွေက အခြောက်လို့ခေါ်တဲ့ ငနဲတစ်ပွေ ပါးစပ်နဲ့ အာသာဖြေပေးတာကို ငြိမ်နေပြီး ဇိမ်ခံခဲ့တယ်ပေါ့။ ၁၆နှစ် ၁၇နှစ်လောက်မှာတော့ ကျနော် ကောင်မလေးတွေကို သဘောမကျမှန်း လိင်တူကို သဘောကျမှန်း သိလာပါတယ်။”
"ငါတို့အခန်းဘေးကပ်ရက်က ကိုထွေးဆိုတဲ့ဘဲက တိုက်ခန်းလှေကားအကွေ့မှာ လုပ်ပြခဲ့တာကွ။ သူ့ငပဲကို ဘောင်းဘီအပြင်ဘက် ဆွဲထုတ်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ လက်ကစားပြ(ထု)ခဲ့တာလေ ခဏပေါ့။ နောက်တော့သူဆက်မလုပ်ဘဲ ထသွားခဲ့ရော။ အဲ့အချိန် တုန်းက ငါတို့အသက်အရွယ်က ၁၂နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်းကောင်းတယ် ပျော်လည်းပျော်ခဲ့သလိုပဲ။ အခုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းတတ်နေပါပြီ”
"ကျနော့်အသက် ၁၂ နှစ်ကျော်လို့ ၁၃နှစ်ထဲရောက်တဲ့အထိ လိင်အာသာဖြေတဲ့ကိစ္စ(-ွင်းထု)တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာဗဟုသုတမှမရှိဘူး အဲ နည်းနည်းလေးတောင်မရှိခဲ့ဘူးဗျာ။ ရူးတယ်လို့ပြောပြော။
ကျောင်းကနေ အိမ်ကို ကျနော့်ထက် အတန်းကြီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့အတူ တောဖြတ်လမ်းကနေပြန်လာခဲ့တယ်။ သည်းခံစိတ်ရှည်တတ်တဲ့လူကို ပေါင်းသင်းချင်တတ်တဲ့အတွက် ကျနော့်ထက်အသက်ကြီးသူတစ်ယောက်ကို သူငယ်ချင်းလုပ်နေ တာလေ။ ကျနော်က ဦးဆောင်စရာမလို သူ့နောက်ကအလိုက်သင့်သွားရုံပဲမဟုတ်လား။ တောထဲဖြတ်လျှောက်လာရင်း ခပ်အုပ်အုပ် သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်လည်းရောက်ရော သူ ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုကာ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ကစားပါတော့တယ် သုံးလေးမိနစ် လောက်။
ကျနော့်မှာ မျက်လုံးတွေပြူးကျယ်ပြီး သူလုပ်သမျှကိုစောင့်ကြည့်နေမိတော့တာပါ။ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ ဘာတွေဖြစ်နေလည်း ကျနော် မစဉ်းစားတတ်ပါဘူး။ သူလုပ်နေစဉ်မှာကော လုပ်ပြီးသွားတော့ကော နှစ်ယောက်သား စကားတစ်လုံးမှမပြောဖြစ်ကြတာ သေချာတယ်။
အချိန်ကာလသိပ်တော့မကြာဘူးပြောရမယ် များမကြာခင်မှာပဲ အခန်းတံခါးကိုလုံအောင်ပိတ်ပြီး အိပ်ရာပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စပြီးလက်ကစားမိပါတယ်။ အစဦးတုန်းကတော့ ပွတ်သပ်တယ် ဟိုသည်ဆွဲဆန့်တယ် လက်ကိုအထက်အောက် လှုပ်ရှားတယ်။ အဆုံးသတ်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲ မတွေးတတ်ဘူးပေါ့။ ကျနော့်ငပဲထဲက တုန်ခါမှုတွေဖြစ်လာသလား တကိုယ်လုံးပဲ လွင့်မြောက်သွားပြီလား အမြင့်တစ်နေရာကနေ ပြုတ်ကျသွားတဲ့ ခံစားမှုမျိုးနဲ့ ကြွတက်သွားရာကနေ မွေ့ယာပေါ်ကို ပြန်လှဲလျောင်းမိ တယ်။ ကျနော့်ငပဲထိပ်ကနေ အရည်ဖြူတွေ ပန်းထွက်သွားတာကြောင့် လန့်လည်းလန့်မိတယ် တစ်ခုခုများဖြစ်သွားသလားလို့။ နောက်ပိုင်းကျတော့ လူလစ်ချိန်ပဲခြောင်းနေတော့တာဗျ ဟားဟား။”
"အလယ်တန်းတက်ချိန်တုန်းက အတန်းထဲမှာ ဇော်ဦးကအထွားဆုံးဖြစ်ပြီး ကျနော်က ဒုတိယအထွားဆုံးဆိုတော့ အားကစားချိန်တိုင်း အတူတူကစားဖြစ်ကြသလို ထူးလည်းထူးချွန်ကြတယ်ဗျ။ နှစ်ယောက်သား အိမ်မှာလူကြီးတွေမရှိချိန်ဆိုရင် အခန်းထဲမှာ နပန်းသတ် ကြတယ် Fighting Play ကစားကြတယ်ပေါ့။ ဇော်ဦးက ပိုထွားတော့ အမြဲလိုလိုသူပဲအနိုင်ရတာပါပဲ။
ကျနော်တို့အသက်တွေဟာ ၁၂နှစ်ထက်တော့မပိုဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ ဇော်ဦးကတော့ လူပျိုဖော်စ၀င်နေခဲ့ပြီ။ နှစ်ယောက်သား နီးနီးကပ်ကပ် ထိုင်ကြတဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် နပန်းသတ်တမ်းကစားကြချိန်ဆိုရင် လူပျိုနံ့လို့ပြောရမလား ကလေးတွေဆီကရတတ်တဲ့အနံ့ မျိုးမဟုတ်တဲ့ အနံ့ကို ကျနော်ရတယ်။ ရူးတယ်ပြောရမလားမသိဘူး သူ့ဆီက ချွေးနံ့မဟုတ်တဲ့ အဲ့သလိုအနံ့မျိုးကို ကျနော်သဘောကျတယ်။ သူနဲ့ ဖက်လှဲတကင်းနပန်းလုံးရတာ သူက ကျနော့်ပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်တာတွေလုပ်ရင် အမြဲသဘောကျနေရော။
ဇော်ဦးက ကလေးထွားထွားနေတုန်းဆိုပေမဲ့ သူ့ရဲ့ကြီးမားချောမွေ့တဲ့ လက်မောင်းကြီးတွေကို ကြည့်ပြီးဝမ်းသာသလိုလို ခံစားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကြည့်ရတာ ဘောလုံးအသင်းထဲက တောင်ပံအားကစားသမားတစ်ယောက်လိုပဲ သန်မာတဲ့ သူ့ပေါင်တံတွေကြောင့်ထင်ရှား နေတယ်။ ပထမဆုံး ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် ပြန်သတိပြုမိတာက ယောက်ျားခြင်းကြိုက်နှစ်သက်တတ်သူ ဂေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီလို့။ အမြဲတစေ ဇော်ဦးရဲ့ တင်သားဆိုင်တွေ ပေါင်ခြံတွေကိုစိုက်ကြည့်နေရတာကို ကြိုက်တယ်။ အဲဒါတွေက တကယ့်အထွားစားပဲဗျ။
တစ်ခါတလေ ဇော်ဦးနဲ့ နပန်းသတ်ကစားချိန်ဆိုရင် ကျနော့်ပေါင်ကြားက ငပဲက ခေါင်းထောင်ထလာတတ်တာကြောင့် နှစ်ဦးသား ငပဲကိစ္စကို ဟာသလုပ်ပစ်ကြတယ်။ သူကတော့ နပန်းပဲသပ်သပ် ကျနော်နဲ့ဖက်လှဲတကင်းပဲနေနေ စိတ်မထမကြွတာသေချာတယ် သူ့ပေါင်ခွဆုံကလုံးဝမလှုပ်ရှားဘူး။ အခြားယောက်ျားလေးတွေလိုပါပဲ တစ်ယောက်ပစ္စည်း တစ်ယောက်ပြကြ စကြပေမယ့် တစ်ယောက် ငပဲ တစ်ယောက်ကိုင်ပြီး လိင်အာသာဖြေတာမျိုး မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဇော်ဦးပစ္စည်းက မျှော်လင့်သလောက်မကြီးဘူးဗျ။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားကြသလို ဆီးခုံမွှေးလည်းမရှိကြဘူး။ ရွှေဥတွေကတော့ စပြီးကြီးလာကြပြီ ထူးခြားနေပြီပေါ့။
ကျနော့်အတွက် လိင်သာယာမှုရဖို့ဆိုရင် နပန်းအားကစားကိုထဲထဲဝင်ဝင် ကစားဖြစ်တဲ့ အချိန်ကစတယ်လို့ပြောရမယ်။ အခြားငနဲတွေ ၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုတွေနဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီတွေကို တင်ပါးတွေ ငပဲတွေပေါ်တဲ့အထိ အောက်ကိုဆွဲချဖို့ကြိုးစားရင်းကနေ စတာပဲ။ တင်အကွဲကြောင်းတွေ တင်သားတွေပေါ်အောင်ဆွဲချရတာကတော့ လွယ်ပေမယ့် ငပဲတွေပေါ်အောင်အထိဆွဲချရတာကတော့ ခက်တယ်ဗျ။ ဇော်ဦးက ဆွဲချလို့ ကျနော့်တင်ပါးတွေ ငပဲတွေ ပေါ်ကုန်တဲ့အဖြစ်ကို ဘယ်လိုသဘောကျမှန်းမသိဘူး။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်သား နပန်းသတ်ကြချိန်ဆိုရင် ဘောင်းဘီဆွဲချွတ်ဖို့ ကြိုးစားကြ ပြန်လုပြီးဝတ်ကြနဲ့ ထုံးစံဖြစ်လာပြီ။ ကျနော်မှတ်မိတဲ့ အချိန်လေးတစ်ခုကို ပြောပြမယ်။ နပန်းသတ်ကြရင်း ကြမ်းပြင်ကို ဇော်ဦးကျောကပ်မိချိန်မှာ သူ့ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်နိုင်ခဲ့ဘူးတယ်။ ဖြူဖွေးကြီးမားတဲ့ သူ့တင်သားဆိုင်ရယ် ခရေ၀ရယ် ရွှေဥတွေရယ် ၀င်းကနဲပဲမြင်လိုက်ရတာ။ အဲ့ဒါတွေကို ကျနော်ကြည့်ချင်နေမှန်း သူရိပ်မိသွားတယ်ဗျ။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ကျနော် လိင်အာသာဖြေတဲ့ကိစ္စ ကြိုးပမ်းတော့တာပဲ။
ဟုတ်တယ်…ဇော်ဦးရဲ့ တင်သားဆိုင်တွေ၊ ငပဲရယ် ၊ ရွှေဥတွေရယ် ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်သင်းနံ့တွေကို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရင်း လိင်အသာ ဖြေတာကိုစလုပ်တော့တာပဲ။ ဇော်ဦးနဲ့နပန်းလုံးချိန် ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုပူးကပ်ထိတွေ့ချိန် ကျနော့်စိတ်တွေမုန်တိုင်းထန်ပြီး ဇာတ်သိမ်း အဲ ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိ လိင်ကိစ္စပြီးမြောက်တဲ့ ခံစားမှုအဆုံးစွန်ကို အလိုလိုဖြစ်မိရတယ်။
နှစ်ယောက်သားအတူတူ လိင်အာသာဖြေဖြစ်ကြသလား မေးရင်တော့ မလုပ်ဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဗျ။ တစ်ယောက်ပစ္စည်း တစ်ယောက်ပြ လို့မြင်ဖူးကြတယ် ကိုယ့်ဟာသာကိုယ် လိင်အာသာဖြေဖြစ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ အတူတူတော့ လိင်အာသာမဖြေဘူးကြပါ။ ကျနော်တို့ အသက် ၁၃နှစ်လောက်လည်းရောက်ရော တက်ရတဲ့ စာသင်တန်းမြင့်လာသလို ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သားကြားက သူငယ်ချင်း ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးကလည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။”
"ရေချိုးခန်းထဲမှာစပြီး သတိထားမိခဲ့တယ်ထင်တယ်ဗျ။ ရေချိုးခန်းထဲမ၀င်ခင်တုန်းက ကျောင်းမှာသဘောကျမိတဲ့ ကျောင်းသား အချို့အကြောင်း တွေးမိခဲ့တာတော့ရှိတယ်။ အ၀တ်အစားလဲလှယ်တိုင်း အတွင်းခံဘောင်းဘီမှာ အရည်ကြည်အချို့စိုစိုနေတာက သုံးလေးရက်လောက်ရှိပြီ သတိထားမိတာ။ ကျနော့်လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ တစ်ခုခုပြောင်းလဲစပြုနေပြီ။ ဘာတွေ စိုစွတ်နေလို့ ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းတော့မသိဘူးလေ။ တစ်ခါတလေ စိတ်လှုပ်ရှားရင် အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲ အရည်ကြည်အချို့ထွက် ပြီး စီးကပ်ကပ်ဖြစ်တတ်တယ်ဗျ။
ကျနော့်ကိုယ်လုံးက ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်ဖြစ်ပြီး အခြားသူတွေလို ခပ်ထွားထွားမဟုတ်ပေမဲ့ အရွယ်ရောက်တာ စောတယ်ဗျ။ အရည်ဖြူ ပျစ်ပျစ်တွေမဟုတ်ဘဲ အရည်ကြည်တွေ ထွက်တာကို အာရုံစိုက်မိရင်းသိလာရတယ်။ လိင်တံထိပ်အရေပြားကိုလှန်ပြီး ဆပ်ပြာနဲ့ မဆေးမိ တဲ့အခါများဆိုရင် အဖြူရောင်အဖပ်တွေကပ်နေရော။ ဆပ်ပြာနဲ့တိုက်ဆေးတဲ့အချိန်ဆိုရင် လိင်တံက ထောင်မတ်လာတတ်ပြီး အိပ်ရာထဲ အိပ်ရင်း မသိမသာပွတ်သပ်မိချိန်များဆိုရင် စိတ်တွေလှုပ်ရှားလာတတ်ကာ ခြေချောင်းလေးတွေကွေးကောက်တုန်ရင်ပြီး အရည်ကြည် တွေ ထွက်ပြုသွားမှ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်တယ်လေ။
အဲ့သလို လက်ကစားတဲ့ကိစ္စကို အိမ်ကအခန်းထဲလွဲလို့အခြားနေရာတွေမှာ ထပ်မစမ်းသပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်း တစ်ခုကိုကြည့်ရင်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင်ကွင်းတွေပါလာချိန်တုန်းကတော့ ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုပြီး လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစပိုင်းတုန်းက ဘောင်းဘီစိုစွတ်နေတာဘာကြောင့်များပါလိမ့်လို့တွေးတတ်ခဲ့တဲ့ ကျနော် လိင်တံထိပ်အရေပြားကိုပွတ်သပ်ပြီးသကာလ မာတောင့်လာ ချိန်ဝယ် လက်ကိုသွင်သွင်လှုပ်ရှားပြီး အရည်ထွက်တဲ့အထိလုပ်တတ်နေခဲ့ပါပြီ။
အဲ့သလိုနဲ့ပဲ လိင်အာသာဖြေတယ်ဆိုတာဘာလဲသိပြီး လုပ်နေခဲ့တာပါပဲ။ ကျနော်လုပ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့အချိန် ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဖြစ်နေပြီပေါ့။ ရက်သတ္တပါတ် သိပ်မကြာခင်တုန်းကတော့ ကျနော့်ငပဲထိပ်ကနေ အဖြူပျစ်ပျစ်အရည်စက်အချို့ ညှစ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ လိင်အာသာဖြေရာမှာ အထွဋ်အထိပ်ရောက်တာကို အရသာခံတတ်လာသလို လအနည်းငယ်အကြာမှာ တော့ ကျနော့်ငပဲကနေ ဖြူပျစ်ပျစ်အရည်တွေ ပန်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။”
"အာ…ကျနော် လိင်ဥ(လဥ)တွေကို ပထမဆုံးအပြစ်တင်ရမှာပဲဗျ ဟားဟား။ နေတဲ့ဒေသကအေးတော့ ရာသီဥတုအေးလာချိန်ဆိုရင် ကျုံ့ပြီး ပေါင်ခြံကိုကပ်တယ်လေ။ လိင်တံကလည်းရှည်တော့ ဘောင်းဘီဝတ်တဲ့နေရာမှာ ခိုးလို့ခုလုဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုလည်း အာရုံ စိုက်မိတယ်။ အိပ်ရာထဲလှဲပြုရင်း ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုပြီး အဲ့လိင်ဥတွေကိုပွတ်သပ်ကြည့်မိတော့ ဖီလင်ကကောင်းလာတာနဲ့ တဖြည်းဖြည်းရှေ့ဆက် ဖြစ်လိုက်တယ် ပြောရမှာပေါ့။ နွေရာသီရောက်လို့ ရေသွားကူးရင် ရေကူးဘောင်းဘီကြပ်ကြပ်ဝတ်ရချိန် ဆိုရင်လည်း ရေထဲ လေးငါးခေါက် ဒိုင်ပင်မထိုးရသေးဘူး စိတ်ထဲထိန်းမရဖြစ်ပြီး ရေကန်ထဲအသာငြိမ်ရင်း ဘောင်းဘီထဲက ငပဲကို ဆွဲထုတ်ဖြစ်တော့တာပါပဲ။”
"ကျနော့်အသက် ၁၁နှစ်အလွန် ၁၂နှစ်ပြည့်ကာနီးအရွယ်တုန်းက စသိခဲ့တယ်ပြောရမယ်။ အဖေ့သန့်စင်ခန်းက အိမ်သာမှာ လိင်အသားပေး မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်ကိုမြင်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားကာ စပ်စုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့စာအုပ်ကအကြောင်းအရာစုံတယ်ဗျ လိင်တူ လိင်ကွဲအကြောင်းအရာစုံ စိတ်ထဲမရိုးမရွဖြစ်အောင် ဓာတ်ပုံတွေကော ၀တ္ထုလိုတွေကောအများကြီးပဲ။ ပေါင်ကြားက ငပဲက စာဖတ်ရင်း မာတောင့်လာသလို ထိပ်က အရေကြည်လေးတွေဘာကြောင့်စို့ထွက်လာရသလဲဆိုတာ အဲ့ဒီအချိန်က ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်မတွေး တတ်ခဲ့ဘူး။ ကျနော်ဘယ်လိုဖြေရှင်း ရမလဲဆိုတာလဲ မသိခဲ့ဘူးလေ။ အဲ့ဒီအချိန်ကာလက ၈၀ပြည့်နှစ်ကာလတွေဆိုတော့ အထက်တန်းကျောင်းများမှာ လိင်ပညာပေး ဟောပြောပွဲလည်းမလုပ်သေးဘူး မီဒီယာအစုံမှာလည်း ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ အသိပညာပေးတဲ့ စာတွေဘာတွေလုံးဝ အရိပ်မသန်းသေးဘူးဗျ။
သန့်စင်ခန်းဆိုပေမယ့် အဖေက သင်္ဘောသားဆိုတော့ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံက သန့်စင်ခန်းတွေလိုပဲ ဖတ်စရာစာအုပ်လေးတွေ တင်ထားတဲ့ စင်လေးရှိတယ်၊ ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေထည့်ထားတဲ့ ဘီရိုလေးကလည်း နံရံမှာကပ်လို့။ ကျနော်လည်း ဟိုသည် လျှောက်ကြည့်ရင်း ဂလစ်ဆရင်းအလှဆီလို အဆီတွေထည့်ထားတဲ့ ပုလင်းတစ်ခုတွေ့တာကြောင့် ကိုယ့်ငပဲကိုယ်ကိုယ်လိမ်းကြည့်ပြီး ဟိုသည်ကစားကြည့်မယ်လို့ အတွေးပေါက်တယ်။ ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိအောင်ကို အရသာတွေ့တာပေါ့ဗျာ စိတ်ထဲကလိကလိနဲ့ ငပဲကြီး အညိုရင့်ရောင်ပြောင်းလို့ ဘာဖြစ်မလဲ မစိုးရိမ်မိပါဘူး။ လက်နဲ့အတင်းဆုပ်ကိုင် ခပ်ပြင်းပြင်းလေး လက်ကစားတာကြောင့် အရေပြား ပွန်းပြီး အနာဖြစ်မှာကိုပဲ စိုးရိမ်စိတ်ဝင်မိတယ် အားလုံးပြီးမှလေ။
ငပဲကနေ အရေကြည်တွေအများအပြားပန်းထွက်လာချိန်မှာတော့ ကျနော် အတော်အံ့အားသင့်မိတာပါ။ ဒီလိုပန်းထွက်လာဖို့ မျှော်မှ မမျှော်လင့်ထားတာကိုး။ လက်ကစားရင်း လက်ကစားရင်း တစ်မျိုးတမည်အရှိန်မြင့်လာတာကိုတော့ သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ငါတော့ သွားပြီ ဘာဖြစ်တာလဲမသိပေါ့လေ။ ကျနော့်သုက်ရည်တွေ၊ အဆီတွေနှင့် ချွေးတွေက ကြမ်းပြင်နေရာအနှံ့မှာပါ။ သန့်စင်ခန်းနံရံတွေ ကြမ်းပြင်တွေပေါ်ကဟာတွေကို အ၀တ်ဟောင်းနဲ့သုတ်သင်ဖို့ကြိုးစားမိပါတယ်။
အဲ့အချိန်မှာပဲ အမေ့ခေါ်သံကို သန့်စင်ခန်းတံခါးနဲ့ကပ်ပြီး ကြားလိုက်ရတယ် ဘာဖြစ်နေတာလဲ ကြာလှချည်လားတဲ့။ ခေါင်းတွေဘာတွေ ကြီးသွားပြီး ငါသေတော့မှာပဲလို့ ဒိန်းကနဲဖြစ်သွားတယ်။ တော်ပါသေးရဲ့ တံခါးကိုလော့ခ်ျလုပ်ထားမိခဲ့လို့နော်။”
"ကျနော့်အသက် ၁၀နှစ်အရွယ်အထိ တစ်ယောက်တည်း ရေမချိုးဖူးဘူးဗျ။ အိမ်မှာဆိုလည်း အမေတို့ အမတို့ကချိုးပေးတာလေ။ ရေပူစမ်းတို့ ရေကူးကန်တို့ လိုက်ပို့လို့ရောက်ဖူးပေမယ့် ကလေးတို့သဘာဝ ဟိုနားပွက်ပွက် ဒီနားပွက်ပွက်ဖြစ်နေတဲ့ ရေပူကန်ထဲ လျှောက်စိမ်ပေါ့။ ရေချိုးရတာကိုက ပျော်စရာပါပဲ။ အခုအရွယ်မှာတော့ မြို့တစ်မြို့ရောက်ပြီဆိုရင် ရေချိုးဖို့ဘယ်နေရာကကောင်းလည်း ဆိုတာ စူးစမ်း နေတာက အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။ ရေပန်းခေါင်းတတ်ထားတဲ့ ပိုက်နဲ့ ရေပူရေနွေး သင့်တင့်အောင်ချိန်ပြီး ကျနော့်ရွှေဥတွေကို ထိအောင် အသာပန်းရတာ ဖီလင်ပါပဲ။ ငပဲကိုပန်းရတာကော တင်ပါးအကွဲကြောင်းတလျှောက် ရေပန်းနဲ့ အသာပန်းရတာကိုရော သဘောကျပါတယ်။ အိမ်သာတက်ပြီး ဖင်ဆေးရချိန် ရေပန်းနဲ့သန့်စင်ရတာကိုက အကြာကြီးအချိန်ယူတယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ် လိင်တံ(-ီး) မမာ့တမာဖြစ်စအချိန် ရေပန်းခေါင်းနဲ့ပန်းထည့်လိုက်တာ အစက သာယာသလိုလိုနဲ့ နောက်တော့ အတော် နာကျင်ရပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့ ရေအားမပြင်းမပျော့ဖြစ်အောင်လုပ် ပိုက်ထိန်းကိုင်ကာ ငပဲနဲ့ ရွှေဥတွေကို အသာအယာပန်း ပြီး သာယာတာပေါ့နော်။ မပူမနွေးရေတွေက ကျနော့်ငပဲနဲ့ရွှေဥကို ထိခတ်နေရင် ငပဲကို ၉၀ဒီဂရီမတ်ထောင်စေသလို စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို လည်း ပိုပြီးဖြစ်စေပါတယ်။ အရင်က ပွက်ကနဲထလာတဲ့ ရေပွက်တွေထဲ ထိုင်ရတာထက်ပိုပြီးကောင်းပါတယ် ခင်ဗျ။
လေးကြိမ် ငါးကြိမ်လောက် ရေချိုးချိန် ကစားတာ အတွေ့အကြုံရလာတော့ ကျနော့်ငပဲကို ရေပန်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရင် ခံစားမှုကောင်းတယ် သာယာတယ်ဆိုတာ သိလာပါတယ်။ အရည်ကြည်ဖြစ်ဖြစ် ဖြူပျစ်ပျစ်အရည်ဖြစ်ဖြစ် ထွက်တဲ့အဆင့်ထိတော့ မရောက်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မကြာခင်သောအချိန်မှာတော့ လူပျိုဖော်ဝင် အရွယ်ရောက်ဖို့ အစပျိုးလာပါတယ်။
ပြောခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေလွန်ပြီးနောက်မှာ အခြားငနဲတွေလိုပါပဲ ကိုယ့်ငပဲကိုယ်ကိုင်ကာ လိင်အာသာဖြေတာမျိုးတွေ တတ်တဲ့ အထိ တိုးတက်လာပါတယ်။ ပေါင်ခွဆုံကို လက်နဲ့အသာကိုင်ထားမိရင် ဒါမှမဟုတ် ပွတ်သပ်မိရင် နောက်ဆုံး လိင်အာသာဖြေတဲ့ဆီ လှမ်းတက် သွားတာပါပဲ။ အသက် ဆယ်နှစ် သို့မဟုတ် ဆယ့်တစ်နှစ်အရွယ်မှာ အစပျိုးခဲ့ပြီး အသက် ၁၃နှစ်ပြည့်ကာနီး ၁၂နှစ်ကျော် မှာတော့ အရည်ကြည်တွေ ပန်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပဲဗျာ။
Alex Aung (15 August 2016)
Note: လိင်အာသာဖြေတာကို ဘယ်လိုတတ်လာသလဲ စတင်သလဲ သိလာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရေးတာ အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိပါပြီ။ ဆက်ရေးမယ်ဆိုရင် အများကြီးပဲရေးစရာရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်တန့်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျ။
Posted by Alex Aung at 6:35 PM No comments:
ကျွန်တော်ဟာ စာရင်းကိုင်အဖြစ် Shipping company တစ်ခုမှာအလုပ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်သူဋ္ဌေးက ကျွန်တော့်အလုပ်ကြိုး စားမှု အတွက်ပျော်ရွှင်သလို သဘောလည်းကျပါတယ်။ စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်အဖြစ် စာရင်းအမှားအယွင်းမရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေး နိုင်သလို ကုမ္ပဏီအတွက်တိုးတက်လမ်းရှိမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ရုံးခန်းထဲမှာ ရုံးအဖွဲ့ဝင် အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရုံးခန်းဖွဲ့စည်းပုံအရ အခန်းငယ်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်အခန်းလေးနဲ့ကိုယ်ပေါ့။ ရင်းနီး နွေးထွေးတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကြားမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ပျော်ရွှင် ပြည့်စုံရပါတယ်။ မိန်းကလေးဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်၊ အမျိုးသားဝန်ထမ်းနှစ် ယောက် ကျွန်တော်နဲ့ဆို စုစုပေါင်း ငါးယောက်ပေါ့ဗျာ။ သူတို့က မကြာခဏ ရယ်စရာတွေပြောဆိုကြ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်း ရင်းနှီးနှီး နောက်ပြုကြနဲ့ ကြားနေရတာ။ ရယ်စရာရှိရင် ရယ်မောကြ၊ စိတ်ညစ်စရာရှိရင်လည်း ဝေဖန်အကြုံပြုကြဆိုတော့ အရင်လုပ်ကိုင် ခဲ့တဲ့အလုပ်ထက်စာရင် ပျော်စရာကောင်းပါ့။ အရင်အလုပ်တုန်းက ကိုယ့်ဘာသာနေ၊ အပေါင်းအသင်း အဆက်အဆံမရှိကြပါဘူး။
တစ်ခုသော နေ့လည်ခင်းမှာ သူဋ္ဌေး ရုံးခန်းထဲဝင်လာပြီးနောက် ၀န်ထမ်းတိုင်းပျော်ရွှင်ရမယ့် ပါတီပွဲလေးတစ်ခု ကုမ္ပဏီဝန်းအတွင်းက စား သောက်ဆိုင်မှာကျင်းပမည့်အကြောင်း ကြေငြာပါတယ်။ အားလုံးစနေနေ့ညအတွက် ဖိတ်ကြားမှုကို လက်ခံရရှိခြင်းပဲပေါ့နော်။ ရုံးခန်းထဲက ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ခြင်းစီအတွက် သူဋ္ဌေးရဲ့ ဖိတ်ကြားမှု ကိုလက်ခံဖြစ်ကြပါတယ်။ ရုံးဝန်ထမ်းကျွန်တော်တို့အပြင် ပြင်ပကတခြားဝန်ထမ်းများလည်း တက်ရောက်ကြမှာပါ။
စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ ဧည့်ခန်းမတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်အပါအ၀င် စုစုပေါင်း၁၅ယောက်ဟာ Boss ရဲ့ကျွေးမွေးမှုအတွက် ချီးမြှောက်တက် ရောက် ကြပါတယ်။ ကော့တေးလ်မျိုးစုံဖျော်စပ်ပေးမဲ့အဖျော်ဆရာနဲ့ ဘူဖေးစနစ်အတွက် အကူအညီပေးမဲ့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကအသင့်။ ပြောစရာမလိုတဲ့ညလေးပါ။ အားလုံးသောက်ဖို့ အဆင်သင့်ဆိုပါတော့။
ညနေခင်းတစ်ခုက မကြာခင်အဆုံးသတ်တော့မှာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့သိလိုက်တယ် ဒီလောက်ဆိုတော်သင့်ပြီပေါ့ သောက်တာ။ အိမ်ပြန် ခရီးကို ၃မိုင်လောက် ကားမောင်းရဦးမှာမို့လေ။ ဒါကြောင့် ညစာစားပွဲမှာ ၀ိုင်တစ်ခွက်ကို နောက်ဆုံးအဖြစ်သောက်ပြီး အပြတ် ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက် သဘာဝသစ်သီးဖျော်ရည် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေ ဖျော်စပ်ပေးနေတဲ့ ဘားနား သွားပြီး လိမ္မော်ဖျော်ရည်ချိုချိုကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အားပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ အရက်နာ ဘယ်တော့မှမကျတဲ့ ကျွန်တော့် လျှို့ဝှက်ချက်လေးပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ ရုံးဝန်ထမ်းထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုခိုင်ဝင်း ကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာရင်း စကားဆိုတယ်။ 'ဇာနည် အပြန်ကား ကြုံလိုက်ချင်လို့ကွာ အဲဒါ ဖြစ်နိုင်မလားလို့ 'သူ့ကားက ၀ပ်ရှော့တစ်ခုမှာ လုပ်ဖို့အပ်ထားတာမို့ ပြီးတော့ကားမောင်းဖို့ လည်း မအိုကေဘူး ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်ကလည်း ခေါ်မယ်လို့ အလွယ်ပြောလိုက်မိတာ။ သူနေတာနဲ့ ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲ့ ဆန့်ကျင် ဘက်ဆိုတာ ပြီးမှ သတိရဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်စရာပါတီပွဲလေးကိုဆင်နွှဲအပြီးမှာ နှစ်ယောက်သား ကျွန်တော့်ကားဆီပြန်လာကြပါတယ်။ ကိုခိုင်ဝင်းက အနည်းငယ် ယိုင်နဲ့နဲ့ လမ်းလျှောက်တာ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ဘေးကထိန်းပေးရတာပေါ့။ ကျွန်တော့် ဘော်ဒါတချို့ကိုလည်း ကူညီပေးနေကျ ဆိုတော့ ဒီအခြေအနေကို ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ကိုရှေ့ခန်းဘေးက ခုံမှာထိုင်ခိုင်း ကျွန်တော်က ဒရိုင်ဘာခုံမှာ ထိုင်ကာ အသာ လှိမ့်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ရေအတော်ဆာနေတာ အခုမှသတိရတယ်။ ညစာစားပြီးကတည်းက သောက်ချင်နေတာကို။ သူ့ကိုရေနည်းနည်း သောက်ချင်လို့ပြော တော့ မီးဖိုချောင်ထဲကိုယ့်ဖာသာစိတ်ကြိုက် ယူသောက်ပါတဲ့။ တစ်လက်စတည်းရေခဲသေတ္တတာ ထဲက နို့တစ်ခွက်လောက် သူ့အတွက် ငှဲ့ယူခဲ့ပါဆိုပဲ။ ဟင်း....ရေဖန်ခွက်ခပ်ကြီးကြီးထဲ ရေကြည်ကြည်လေးတွေငှဲ့ ထည့်၊ ပြီးတော့သူ့အတွက်နို့တစ်ခွက်ထည့်ကာ သူ့ဆီလှမ်း ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်လုံးညောင်းညာနေတာကြောင့် အိပ်ချင်သလိုလိုဖြစ်စပြုလာပါပြီ။ ကိုခိုင် ထိုင်နေတဲ့ဆိုဖာအစွန်းမှာထိုင်ရင်း သူ့ဆီနို့ ခွက်လှမ်းပေးလိုက်တော့ သူက အတူတူ တီဗီကြည့်ကြတာပေါ့တဲ့ မအိပ်သေးခင်လေ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲက သူဒီအတိုင်းပြောစေချင်နေ တာ ဒီအချိန် မှာ။ ကားမောင်းအိမ်ပြန်ဖို့ အဆင်မပြေတော့တဲ့ ကာလဖြစ်နေပြီ မဟုတ်လား။ ဆိုဖာပေါ်မှာ လှဲအိပ်ရတာ ပိုသင့်တော်တယ် ကျွန်တော့်အတွက် ဒီညဟာ။ ကောင်းတာပေါ့ ဟုဆိုလိုက်တော့ ၀မ်းပမ်းတသာနှင့် တီဗီထဖွင့်လေရဲ့။ channel လိုင်းတွေဟိုသည် ပြောင်းဖွင့်ရင်း ခဏကြာတော့ Porn movie ကြည့်ရအောင်တဲ့ သူသောက်ထားတော့ စိတ်ထဲနည်းနည်းကြည့်ချင် စိတ်ဖြစ်နေပါသတဲ့။
သူရှေ့မှန်စားပွဲပေါ်က ရီမုဒ်ကိုထယူကာ VCR ကိုဖွင့်ပါတော့တယ်။ ရုပ်ရှင်က တစ်ပိုင်းတစ်စဖွင့်လက်စကြီးပဲ။ ၀ိုး.....ခပ်တောင့်တောင့် ဘဲကြီး တစ်ပွေက သင်္ဘောပေါ်မှာ စော်တစ်ပွေကို ကစ်နေတာမိုက်မှမိုက်။ အဲဒီကားက အတော် hot တာပဲဗျ။ စိတ်ထဲ အဲဒီဘဲကြီးဟာ ကျွန်တော် ဖြစ်သွားပြီး ထွားအိတဲ့အသားဆိုင်ထဲ ငပဲကို လျှောကနဲသွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်....အိုး....ဖီးလ်ပဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ မာတောင် စပြုလာပါပြီဆိုတော့ကာ ဘောင်းဘီထဲ အသာနေရာချပြီး မသိမသာ ကိုခိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ သူ့ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုပြီး လက် ကစားနေတယ်။ ခဏကြာတော့ သူ့ဘောင်းဘီကိုလျှောဖယ်ကာ အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။
ဟူး.....အတော်ကြီးတဲ့ဟာ။ အနည်း ဆုံး ၆ခွဲ ကျော်မယ်။ ပြီးတော့ တုတ်လည်းတုတ်တယ်။ ဆိုဖာကိုနောက်မှီလျှောထိုင်ကာ ရုပ်ရှင်ကိုကြည့် ထုပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်က တော့ အတွင်းမှာပဲ လက်လျှိုပြီးကစားနေဖြစ်သပေါ့။
TVပေါ်က scene ကတော့ချိန်းသွားပါပြီ။ ခပ်ထွားထွားပျိုမေက ဇာတ်လိုက်ကျော်ကို ပုလွေမှုတ်နေသလေ။ ကိုခိုင်က 'ဒီစော် ပုလွေဘယ် လိုမှုတ်ရတယ်ဆိုတာ မသိဘူးကွ၊ အဲဒီဘဲကို ကျီစယ်တာကျနေတာပဲ'။ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလိုပဲ ထင်တယ်။ မိန်းကလေး တော်တော်များများ ပုလွေမှုတ်တာကောင်းအောင် မမှုတ်တတ်ကြဘူး။ ကိုခိုင်ပြောတာကို သဘောတူရင်း ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာက စော်တွေ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ erotic spots အကြောင်းကို သေချာ မသိကြဘူးဆိုတာ။
ကျွန်တော်ကဘာပြောရမှာလည်း စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန် ဘယ်သူလာပြီးကိုင်တွယ်ပေးမလဲ ခွင့်ပြုမိမှာသေချာတယ်။ ဒီတော့ အသာခေါင်း ဆတ်ပြရင်း ဆက်လုပ်ကိုယ့်ဆရာပေါ့။သူကျွန်တော့်နားအမြန်ကပ်လာပြီး သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆုပ်ကိုင် ပါတော့တယ်။ ထိပ် ဖျားလေးကို လက်ထိပ်ကလေးနှင့် အသာပွတ်ပြီးနောက် လက်ကိုအပေါ်အောက်လှုပ်ရှားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့် မျက်ဝန်းတွေ အသာ မှေးမှိတ်လိုက်မိပြီး လွန်ခဲ့တဲ့အပတ် လောက်က စော်တစ်ပွေနှင့်ဒိတ်ပြီး ကဲခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကို စိတ်ထဲပြန်ခံစားမိ ရသပေါ့။ ပြည့်ဖောင်း လက်သွယ်သွယ်၊ နူးညံ့တဲ့ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ပေးမှုလေးတွေအဖြစ် မြင်ယောင်မိသည်လေ။
'ငါ...စိတ်ထဲ အရမ်းဖီးလ်လာနေပြီကွာ.... ဒီထက်ပိုပြီး အရသာခံစားချင်တယ်....ရမလားက'ွ သူ့ပထမဦးဆုံး _ီး တစ်ခုရဲ့အရသာကို စမ်းသပ်ချင် သတဲ့။ မတားပါဘူး လုပ်ပေါ့။ အသက်ရှူငွေ့လေပူနွေးနွေးတွေ ကျွန်တော့်ကွမ်းသီးခေါင်းရဲ့ထိပ်ဖျားဆီက ရလာမိပြီးနောက် သူ့နှုတ်ခမ်း ဖျားများရဲ့ နူးညံ့မှုကို စတင် ထိတွေ့ရပါပြီ။ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို အသာငုံထွေးပြီး.....ဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျှောချလိုက်တာ အာခေါင်ထဲထိ။
ကိုခိုင်ရဲ့ အပြုအစုကောင်းလေးတွေရနေစဉ်ခဏ သူ့ပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး 'ဘယ်လိုခံစားရလဲ?' အမေးထုတ်တယ်လေ။
အိုး....အဲဒီ ဖီးလ်က အရမ်းမိုက်တယ် စော်တွေနဲ့တုန်းက အဲဒီဖီးလ်ကို မခံစားခဲ့ရဖူးဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ဒီတော့ သူက တစ်ဆင့်တက်လာ တယ်။ သူ့ငပဲ ကို အဲဒီလိုစမ်းပြီးပြုစုကြည့်ပါလားတဲ့။ ကျွန်တော်....ကျွန်တော်လည်းပဲ စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်ချင်မလား၊ ပြီးတော့ မိန်း ကလေးပြုစုတာနဲ့ ယောက်ျားလေးလုပ်ပေးတာဘာကွာခြားလဲ အဲဒီ့ဖီးလ်ကိုခံစားကြည့်ချင်လို့ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်ခဏစဉ်းစားကြည့်ပြီး 'အိုကေ လေ.... ကျွန် တော်ခဏတော့စမ်းလုပ်ကြည့်မယ်'လို့ဖြေလိုက်မိပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ရာရောက်မလား တွေးမိသွားလို့ပါ။
ကျွန်တော်လည်း သူ့ငညိုကို အသာအယာဆက်ပြီးစုပ်မျိုနေဖြစ်သလို လက်ကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် ငပဲကို ကိုယ့်ဖာသာကိုင်ကာ ခပ် ဖြည်းဖြည်းထုနေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုခိုင် သူ့ငညိုကို လည်ချောင်းထဲရောက်အောင် အသာထိုးထည့်လိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်အရှိန်တက်နေ ရာကနေ 'I'm ready to shoot!' တဲ့။
ကိုယ့်ဖာသာတွေးလိုက်မိတာက သူ့ငညိုကို ဆွဲထုတ်ပစ်ရမလား? သူ့ဟာကို ကျွန်တော့်ပါးစပ် ထဲပန်းထည့်ခွင့်ပေးပြီး သူ့ man juice ရဲ့အရသာကိုမြည်းစမ်းကြည့်ရမလား? ဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး သူ့ငညိုကိုစုပ်မြဲ မှုတ်မြဲ လုပ်လိုက်တာ သူခါးကို တစ်ချက်ကော့ကာ ပါးစပ်ထဲအဆုံးထိထိုးထည့်လိုက်ရင်း ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ အရသာက မုန်းစရာ တော့ နည်းနည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးက မကျေနပ်စရာတော့ ဟုတ်ဟန်မတူခဲ့။ သူပန်းထုတ်ပြီးသွားချိန်အထိ ကျွန်တော် သူ့ငညိုရဲ့အရသာကိုစမ်းသပ်ရယူချင်နေတုန်းပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက ပန်းထုတ်လည်းပြီးရော ဆိုဖာပေါ် ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်လိုက်တော့တာ ပါပဲ။
ရုပ်ရှင်ကိုဆက်ကြည့်တော့ရင်ထဲအတော့်ကို ဆာလောင်နေတဲ့ဖီးလ်ကိုခံစားရတယ်။ စော်တစ်ပွေများအနားမှာရှိလို့ကတော့ တဘောင်း ဘောင်းမည်သွားမှာအသေချာ။ ရုပ်ရှင်မှာ စော်ကဘဲကြီးပေါ်တက်ခုန်နေတာဗျာ။ ငပဲကြီးက ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်။
'ရှီး....good' ရုတ်တ ရက် ကိုခိုင် ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ယူလိုက်တာ အာခေါင်ထဲအထိ။ ပြီးတော့ခေါင်းကို အပေါ်အောက် ခပ်သွက်သွက် လှုပ်ရှား ပေးတော့တာ။ အရှိန်ရနေတဲ့ကျွန်တော့် balls တွေထဲက တင်းကနဲ တင်းကနဲဖြစ်ပြီးနောက် သူ့ပါးစပ်ထဲ ပန်းထုတ်လိုက်မိတော့တယ်။ ကျွန်တော် ပန်းထုတ် လိုက်ပေမဲ့ သူကတော့ဆက်ပြီးစုပ်မြဲ အဲဒီလိုနဲ့ခဏအကြာမှာတော့ 'အာ...အ...အ' တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ ဒုတိယ အကြိမ် တဆစ်ဆစ်ပန်း ထည့်မိပြန်ရော။ မပျော့သွားမခြင်းလွှတ်မပေးတဲ့ ကိုခိုင်ဟာ အတော်ကြာမှ လွှတ်ပေးပါတယ်။
ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်ရဲ့ အစဦးတနင်္လာနေ့ရောက်ခဲ့ပြန်တော့ ထုံးစံအတိုင်းရုံးကိုသွားပါတယ်။ ရုံးခန်းတံခါးကိုဖွင့်ကာ အထဲဝင်ပြီး နောက် မျက်လုံးတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ ကိုခိုင် သူ့အခန်းငယ်လေးထဲအလုပ်လုပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရရော။ ကျွန်တော်ဝင် လာတာကို သူမြင်သွား ဂရုပြုမိသွားချိန်မှာတော့ 'Good morning, ဇာနည် ဒီညအတွက် ဘာအစီအစဉ်ရှိသေးလဲ?'
Alex Aung (26 Jan 2010)
Note: သူငယ်ချင်းတို့ အပျင်းပြေဖတ်ဖို့ ဘာသာပြန်မိတာလေးပြန်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 10:11 AM No comments:
ဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ် မသိပါဘူး။ ကျောင်းသွားတော့လည်း တက္ကသိုလ်ဝန်းထဲ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိတဲ့ ဘဲတွေရဲ့ ပေါင်ဂွဆုံကိုပဲ မျက်စိ ကရောက်ရောက်နေတယ်။ မနေ့ညကဂျစ်တူး ပို့ပေးလိုက်တဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီကြော်ငြာမော်ဒယ်တွေရဲ့ ရေစိုနေတဲ့ အောက်ပိုင်း တွေကို ကြည့်ပြီးကတည်းက ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဖီလင်။ ငပဲခပ်ထွားထွားတွေကိုင်ကြည့်ပြီး ပါးစပ်ထဲထည့် ရေခဲချောင်းစုပ်သလို စုပ်ချင်နေတာ လေ....။
နေ့လည်ပိုင်းကျောင်းကအပြန် အွန်လိုင်းပေါ်တက် Craigslist ထဲဝင်ကာ ဘယ်ငပွေးတစ်ယောက်နဲ့ချိတ်ဖို့ အိုကေမလည်း ရှာကြည့်ရ တယ်။ ဟိုသည် ပရိုဖိုင်းတွေမွှေရင်း ခဏနေတော့ တွေ့ပါပြီ ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ရဲ့ အတွင်းခပ်ကျကျအပိုင်းမှာနေတဲ့ ဘူထွားတစ် ယောက်ကိုပေါ့။ သူ့ပရိုဖိုင်း info မှာတော့ ဘော်ဒီက bear type တဲ့။ ဒါနဲ့သူ့ဆီ မေးလ်ပို့လိုက်ပြီးနောက် ဟို သည် website တွေ မွှေရင်း ထိုင်နေတဲ့ခဏမှာပဲ သူ့ဆီက မေးလ် ပြန်လာပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ 'Daddy' ဆိုတဲ့ နာမ်စားနှင့် သုံး ပြီးရေးသားထားသလို ကျွန်တော့် ကိုကျတော့ 'bitch' တဲ့လေ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လိမ္မာပါးနပ်စွာနှင့် တုန့်ပြန်မှုမလုပ်ဘဲ နေသင့်တာပါ။ သူက ဘာဓာတ်ပုံမှ ပို့ဖို့မလို ပေးထားတဲ့ လိပ်စာအတိုင်း ဒီညနေကျွန်တော်လာဖို့ပဲလိုသတဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့တိုက်ခန်းကိုလာပြီး ဒစ်ကြီးကြီးကို ကောင်းကောင်း ပြုစုမယ်လို့ အီစီကလီလုပ်လိုက်တယ်။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲအလွန့်ကို ထကြွသောင်းကျန်းနေတာက -ီး တစ်ချောင်းကို စုပ်ချင်နေတာ။ ဘယ်သူရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ နည်းနည်းတော့ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒစ်ကြီးကြီးကို လျှာနဲ့ရစ်ဝိုက်စုပ်မျိုတဲ့အခါ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါပြီး ပူ နွေးပျစ်ချွဲတဲ့အရည်တွေ နှုတ်ခမ်းတို့ လျှာတို့ပေါ်ရောက်ရှိလာတာ တော်တော်ဖီးလ်ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် သူတို့ ကျေနပ်သွားတဲ့ မျက်နှာတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားရတာတော့အမှန်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုးသန့်စင်လိုက်ကာ Daddy ရဲ့ တိုက်ခန်းရှိရာကို ကျွန်တော့်အချစ်တော် Volvo ကားအ၀ါလေး မောင်းပြီး သွားခဲ့တာပေါ့။ သူပြောတဲ့လိပ်စာအတိုင်းရောက်သွားတော့ ကျွန်တော့်မူရင်းစိတ်အမှန်အတိုင်းဆို အဝေးကိုမောင်း ထွက်သွားလိုက်မှာ။ တိုက်ခန်းကကြည့်ရတာ အဆင်မပြေသလို လုံခြုံစိတ်ချရမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံလည်း မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ မြို့ရဲ့အစွန် အိုဟောင်းသောတိုက် တန်းလျား အလင်းရောင်သိပ်မရှိတဲ့ တိုက်ခန်း။ စိတ်ကသာ အဝေးကိုကားမောင်းထွက်သွားချင်ခဲ့တာ ကျွန်တော့်လက်တွေက ကားသော့ ကိုဖြုတ် ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲတောင် ထည့်ပြီးနေပြီ။ ပြန်လှည့်ဖို့ထက် စိတ်ထဲထကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့သွေးတွေက ရှေ့ ဆက်တိုးနေစေ တာလေ။
တိုက်ခန်းနံပါတ်ကိုကြည့် အခန်းတံခါးကို တစ်ချက် နှစ်ချက်သုံး ချက်ခေါက်တာမှာ ဘာတုန့်ပြန်မှုမှ မရခဲ့။ ဒါဟာသ တစ်ခု လား? ကျွန်တော့်ကို ဟာသတစ်ခုအဖြစ်မြင်ခဲ့သလား? ကားဆီ ပြန်သွားဖို့ လှေကားထစ်ဆီ ခြေအလှမ်းမှာ တံခါးမကြီးက ဟ လာပြီး အသံ ခပ်သြသြကိုကြားရတယ်။ 'အထဲကိုဝင်ခဲ့ကောင် လေး၊ ပြီးရင် မင်းအ၀တ်တွေ ချွတ်ထားလိုက်' အခန်းထဲ ခပ် တုန့်တုန့်ဝင်လိုက်တော့ ကျွန်တော်သတိထားမိရတာက အခန်းတစ်ခုလုံးဟာ စတူဒီယိုတစ်ခု။ တော်တော်သေးတဲ့အခန်း ပဲ။ ညနေစောင်းပဲရှိသေးတာ ဒီအခန်းထဲ မှာတော့ မဲမှောင်နေပြီ။ ညမှာအလုပ်လုပ်ပြီး နေ့ခင်းကို အိပ်စက်တဲ့ လူထင်ပါ့။ ရေချိုးခန်းထဲက မီးရောင် မလင်းတလင်းက ဧည့်ခန်းလား ဘာလားမသိတဲ့ အခန်းကြီးထဲ အလင်းရောင်ထိုးပေးနေရဲ့။ အခန်းထဲနောက်ထပ် အလင်းရတာက ကျွန်ပျူတာ မော်နီတာ တစ်လုံးကလာတာဗျ။ အခန်းထဲဝင်ဖို့ပြောတဲ့ ခပ်သြသြအသံက အဲဒီ ကွန်ပျူတာရှေ့ကြားရတာဖြစ်မယ်။
အခန်းထဲ မရဲတရဲဝင်ပြီး သူ့အမိန့်အတိုင်းအ၀တ်တွေကိုချွတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်သတိထားမိရပြန်တာက အခန်းထဲမှာ ကျွန်တော် ကလွဲလို့ လူတစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ။'Daddy' Daddy က တကယ့်ကို ၀က်ဝံကြီးလိုထွားကြိုင်းသူပါလား။
အသားအရေညိုမောင်း သလို အရပ်က ၆ပေကျော်မယ်။ ကျွန်တော့်အထင် ပေါင် ၂၀၀ကျော်မယ့် ကိုယ်အလေးချိန်ပိုင်ရှင်ပါပဲ။ အမွှေးအမျှင်ကလည်း သန်ပါ့။ စွပ်ကျယ်တစ်ထည်ဝတ်ထားပြီး အောက်ပိုင်းကတော့ boxer ဘောင်းဘီတိုကို ခပ်စုတ်စုတ်ဝတ်ထားတယ်။
ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာမှာ jockey ဘောင်းဘီနှင့်ခြေအိတ်တွေကလွဲလို့ အ၀တ်တွေကိုချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ Daddy က ခပ်ငေါက်ငေါက် အသံနှင့် ၀တ်ထားသမျှ အကုန်ဖယ်ပစ်ဖို့ အမိန့်ပေးတာ။ အဲဒါနဲ့ Jocky ဘောင်းဘီရော ခြေအိတ်ရော ချွတ်ပစ် ရတယ်လေ။ Daddy က ကျွန်တော့်အ၀တ်အစားမှန်သမျှ အားလုံးစုကိုင်ပြီးနောက် ဘီရိုတစ်လုံးထဲထည့်ပြီး…..ထည့်ပြီး ဘီရိုတံခါး ကို သော့ခတ်ပစ်လိုက်ပါရဲ့။ နံပါတ်တွေလှည့်ပြီးဖွင့်မှရတဲ့ သော့ခလောက်နှင့် ခတ်ပစ်တာဗျ။ အခုတော့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေက အလွန်ကြောက်လန့်တာမျိုးပဲ ရှိတော့တယ်။ ဒီကနေ ကျွန်တော်ထွက်ပြေးသွားလို့လည်း မရတော့ဘူး။ အ၀တ်အစား တွေလည်းမရှိ ကားသော့ကလည်း ကျွန်တော့် ဂျင်းဘောင်းဘီအိတ်ထဲမှာလေ။ အခု သူ အကုန်လုံးဘီရိုထဲထည့် သော့ခတ်ပြီး သော့ကိုလည်းယူသွားပြီ။
Daddy က ဒူးထောက်ပြီး -ီးစုပ်ပေးလို့ စခိုင်းတော့လာပဲ။ ကျွန်တော်လုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ အရာကို အခု အလျင်စလိုမလုပ်ဘဲ စတင်ရပါပြီ။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ပဲရွေးချယ်ခဲ့ရမယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်တော့ပါဘူး စိတ်ထဲ cross ဖြစ်သွားပါပြီ။ Daddy ကျွန်တော့်ကို ကွန်ပျူတာ ဂိမ်းကစားနေတာများ အောက်မေ့နေသလားမသိဘူး။ အ၀တ်တွေ ပြန်ပေးပါ ကျွန်တော်စိတ်မပါတော့ဘူး မလုပ်ချင်တော့ဘူးပြောဖို့..... ကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်ကိုအ၀တ်တွေ ပြန်မပေးတော့မှာ တစ်ခုခုများ သူလုပ်လိုက်မလား သူ့ အား အင်ကြီးနှင့်လေ။ မနက်ကျောင်းသွားရဦးမယ်....ညအပြန်မိုးချုပ်ရင် မေမေတို့စိုးရိမ်နေကြဦးမယ်။ အခုမှ ကျွန်တော်ကြောက် လန့်စိတ် ပြင်းထန်လာပါ တော့တယ်။ကျွန်တော်အရူးပဲ စိတ်က ကြောက်လန့်နေပေမဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေက Daddy ရဲ့ အမြှောက်တံကြီးကို အားရပါးရကိုင်ကာ လျှာတွေ နှုတ်ခမ်းသားတွေက ကောင်းကောင်းပြုစုနေပါပြီ။ သူ့အမိန့်ကို လိုက်နာခဲ့ပြီ လေ။ အခုအချိန်မှာ .....ဒစ်ကိုစုပ်နေချိန်မှာ ကြောက်စိတ်ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ ။ ဒါကျွန်တော်လုပ်ချင်နေခဲ့တဲ့အရာပဲ မဟုတ်လား။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့လာခဲ့တာပဲလေ။
မုဆိုးဒူးထောက်ထိုင်ကာ Daddy ရဲ့ ဘောင်းဘီတိုကို ဆွဲချ လိုက်ကာ သူ့ငပဲကို နှုတ်ခမ်းဝမှာ အသာတေ့ရင်း မှုတ်တယ်။ ပျော့ပြောင်းနေ တဲ့ ငထွားကြီး မာလာပြီး ကျွန်တော့်လည်ချောင်းထဲ အတွင်းကျကျထဲရောက်ဖို့ သူကြိုးစားတော့တာပေါ့။ လည်မျိုထဲထိ ထည့်ထည့်ပြီး အသက်ရှူ မ၀အောင် သူလုပ်တယ်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ထိန်းကိုင်ကာ သူ့တင်ပါးကို ခပ်သွက်သွက် လှုပ်ရှားရင်း deep throat ပေါ့။ လျှာတွေ အာ တွေနှင့် ပြုစုနေရတာ အချိန်ဘယ်လောက်ထိကြာလာပြီလည်း သိလား မိနစ် ၃၀ ကနေ မိနစ်လေးဆယ်။ ကျွန်တော့်မေးရိုး တွေ ငြောင်း ပါးစပ် လည်းနာလာပြီ။ Daddy ကတော့ သာယာနေတယ်ထင်ပါ့။ တစ်ချိန်လုံး သူ့ပါးစပ်က 'bitch' စကားလုံးချင်းမိုးမွှန်နေ တာ။ စိတ်ထဲက ရှက်သလို နာကျင်သလို ခံစားရနေပေမဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ ဒီအတွေ့အကြုံကိုကြိုက်နှစ်သက်နေတယ်။ Daddy ပြောသလို ကျွန်တော်ဟာ 'bitch' ။
အဆုံးမဲ့ စုပ်မှုတ်ပေးနေတာပြီးမယ့်ပုံမပေါ်သေးဘူး။ climax ဖြစ်ဖို့ နည်းကပ်လာပြီ....အား။ ကျွန်တော့်နားထင်ကို လက်နှင့်တစ်ချက် ခပ်ဆပ်ဆပ်ရိုက်ရင်း အိပ်ယာဆီလိုက်ခဲ့ဖို့ Daddy က ပြောပါတယ်။ သူ့နောက်ကိုအသာလိုက်သွားရသပေါ့လေ။ အိပ်ယာခုတင်စွန်းကို ရောက်တော့ လေးဘက်ထောက်ကုန်းကာ သူ့ခရေ၀ကို လျှာကျွေးခိုင်းပါရော။ ကျွန်တော် ဒီလိုလုပ်ပေးရတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုး တစ်ခါမှ မရှိဖူးဘူး။ လျှာကို ခပ် တောင့်တောင့်လေးလုပ်ကာ သူ့အမိန့်အတိုင်း ခရေ၀ကို မရဲ တရဲတို့ထိပြီး ကစားရတယ်။မလွန်ဆန်နိုင်လို့သာ လျှာကစားပေးနေရတယ် အနံ့အသက်တစ်မျိုးရနေပါ့။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု မလုပ်တဲ့သူတွေကို ကျွန်တော်မုန်းတယ်။ အခုတော့ မုန်း တာအသာထား လုပ်ပေးနေရပေါ့။ Daddy ခရေ၀၀န်းကျင်ကို နှုတ်ခမ်းတွေလျှာတွေသုံးပြီး ငပဲကိုပြုစုခဲ့ရသလို လုပ်ပေးဖြစ်ပါ တယ်။ စိတ် ထဲကြောက်ရွံ့နေတာတွေဟာ ငပဲကိုစုပ်ပေးခဲ့ချိန်တုန်းကလိုပါပဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားကာ သာယာလာမိပါရောလား။ ကျွန်တော် အခုသိလာပြီ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသုံးချခံဖြစ်ရတာကိုလေ။ ဒီလိုအသုံးချခံရတာကိုပဲ ပျော်ရွှင်လာမိပြီ။ Daddy က bitch ခြင်းမိုးမွှန် အောင် ပါးစပ်ကခေါ်ကာ လုပ်ခိုင်းချင်ရာလုပ်ခိုင်းနေသောအဖြစ်ကို သဘောကျလာပြီပဲ။ သူပြောခဲ့ တဲ့ ကျွန်တော့်အနေအထားက ဒီနေ့ အတွက်မှန်တယ်။ ကြောက်လန့်ပြီး အိမ်ကိုပြန်ချင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာ အဆုံးသတ်ချင်စိတ်ဖြစ်နေတာနှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ဒီလိုလုပ် ပေးပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ပေးရဦးမှာလည်း ကျွန်တော်သိချင်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ လုပ်ပေးချင်နေတာ။
ကျွန်တော့်တစ်သက်များကြာသွားပြီလား ထင်ရချိန်ထိ သူအရသာခံတယ်လေ။ အနည်းဆုံး နာရီဝက်ကျော်မယ်။ Daddy က ရပ်ဖို့ပြော တဲ့အချိန် ကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရနဲ့ ထရပ်လိုက်ကာ အ၀တ်တွေ ပြန်ပေးဖို့တောင်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအ၀တ်ကိုပြန်တောင်းတဲ့ စကားသံတောင် မဆုံးလိုက်ရပါဘူး။ ရေချိုးခန်းတံခါးပွင့်လာပြီး Daddy နည်းတူ ခပ်ထွားထွားလူရွယ် နှစ်ယောက် ထွက်လာတာကိုကြည့် ရင်း ကျွန်တော် ဆွံ့အသွား တယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်လက်တွေ ဆွဲချုပ်ကိုင်ရင်း ဒူးထောက်နေခိုင်းရော။ Daddy အပြေးလေးရောက်လာကာ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာရပ် ပျော့နေတဲ့သူ့ငပဲကြီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ တစ်စက်မှ မဖိတ်စဉ်စေနဲ့တဲ့ပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုမလုပ်ရင် မင်းနာမယ် ဆိုပဲ။ ပထမတော့ ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး သူဘာကိုဆိုလိုတာလည်းလို့။ အား...Daddy .... ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲကို သေးပေါက်ထည့်တာ။ စပ်ဆုပ်ရွံရှာဖို့ ကောင်းသလို.....ညစ်ပတ်နံစော်ပြီး ထွက်ခွာဖို့ကြောက်လန့် နေရတဲ့အဖြစ်ပါ။
ကျွန်တော်မရှောင်ဖယ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ အ၀တ်တွေမရှိဘူး။ ကျွန်တော့်ကားသော့... ကားသော့လည်းမရှိဘူးဗျာ။ အိမ်နဲ့လည်း အလှမ်းဝေးလွန်း တယ်။ အခြားလူနှစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုချုပ်ကိုင်ကာ ဒူးထောက်နေစေပြီး Daddy ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သေးပေါက် ထည့်တာကို ကြည့်ကာ အော်ဟစ်အားရနေကြတယ်။ ကျွန်တော် ထွေးထုတ်ပစ်ဖို့ မကြိုးစားနိုင်သေးဘူး သူတို့ချုပ်ကိုင်မှုများကြား။ Daddy ရဲ့ သေးတွေကရွံရှာဖွယ်အတိ အရသာငံကျိကျိပါ။ ဘယ်တုန်းကမှ သေးရဲ့အရသာခံကြည့်ခဲ့ဖို့ မစဉ်းစားခဲ့မိဘူး ကိုယ့်ရဲ့သေး အပါအ၀င်ပေါ့။ အော့အံမိမလို ဖြစ်ပြီး အားလုံးထွက်ကုန်တော့မလို့ ဖြစ်သေးတာ Daddy တို့သုံးယောက်ရဲ့ မျက်လုံးပြူးကြီးများကြောင့် ပမာဏနည်း နည်းဖိတ်တာကလွဲလို့ တာဝန်ကျေခဲ့ရပါတယ်။
Daddy ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သေးပန်းထည့်ပြီးနောက် ကျန်နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို သူ့ရှေ့ဆွဲယူကာ သူ့ အ လှည့်ပေါ့။ ကျွန်တော်ရုန်းကန်ပြီး လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း ရှာပေမယ့် အချည်းအနှီးပါပဲ။ အဝေးကိုခွာလို့မရသလို လူသား ဆီးသွားခွက် အဖြစ် အတင်းအကျပ်လုပ်ခိုင်းခံရပါတယ်။ ကြွေကမုတ်မဟုတ်သော သက်ရှိလူသားလေ။
သူတို့အားရအောင် ဆီးသွားပြီးတော့ ကျွန်တော်ကြမ်းပြင်ပေါ် ခြေကုန်လက်ပန်းကျသလိုမျိုး ပုံရက်သား။ ဒါကို မညှာမတာ ကျွန်တော့် ချိုင်းကြားကနေ မကာ ရေချိုးခန်းဆီဆွဲခေါ်သွား တယ်။ နောက်ထပ်လာတဲ့ လူနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို လေးဘက် ကုန်းစေကာ ချယ်ရီပေါက်လေးကို လျှာကျွေးပါရော။ အခြားတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲကို ရွှေနီငှက်ပျောအလား ထွားလှတဲ့ -ီးတံ ကြီးကို အတင်းထိုးတည့် ပါတယ်။အသက်ရှူမ၀တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင် ရှေ့ကလူ က အသွင်းအထုတ်လုပ်နေ သလို နောက်ကလူက လည်း လျှာ ကျွေးရုံမကျေနပ်တော့ဘဲ လက်ချောင်းတွေနဲ့နှိုက်ဖို့ ကြိုးစား တာဗျ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဖီးလ်မလာ တော့သလိုမျိုးခံစားရကာ နှိပ်စက်မှုငရဲခန်းထဲက လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ မျက်စိကိုဘေးအကြည့်ရွှေ့လိုက်တာ ရေချိုးခန်းနံရံက မှန်ချပ်တွေက တစ်ဆင့် Daddy ငြိမ်နေရခြင်းအကြောင်းကိုသိသွားရပါပြီ။ ဗီဒီယိုကင်မရာတစ်လုံးနှင့် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံက မှတ်တမ်းတင် နေခြင်းကြောင့်လေ။ သူ့ပေါင်ခြံက ငပဲကလည်း မိုးပေါ်ကို ထောင်လို့။
'အား....အား....သေပါပြီ' လက်ချောင်းတွေနှင့် ခရေ၀ကိုချဲ့နေ တဲ့လူက ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို ချောဆီမဆွတ် သူ့လဒစ်ကိုဖိပြီး အဆုံးထိ သွင်းပစ်လိုက်တာ။ တရစပ်ဆောင့်ချက်များကြောင့် နာကျင်ရသလို ကော့ကော့သွင်းလိုက်တဲ့ သူ့ဟန် တစ်မျိုးကြောင့်လည်း စိတ်ထဲက ဟာတာတာ။ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာ ထဲက တစ်ဆင့်လည်မျိုထဲရောက်ရောက်လာတဲ့ ငပဲဟာလည်း အထုတ်အသွင်းခပ်မြန်မြန် လုပ်စေချင် သတဲ့။ Daddy....ဘာ လုပ်သလဲ? ကင်မရာကို ထောက်တံမှာအသာတင် လေးဘက် ထောက်ကာထားတဲ့ ကျွန်တော့်ဝမ်းဗိုက်အောက် ခေါင်းဝင်ကာ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို အစကနေ အဆုံးထိမျိုချသွင်းစုပ်လိုက်တယ်လေ။
တစ်ခါမှ တစ်ခါဖူးမျှ ဒီလိုဖီလင်မျိုးမရဖူးဘူး။ ရှက်ကြောက် နာကျင်ထိတ်လန့်မှုနှင့် ရင်ခုန်မှုရောစပ်နေတဲ့ဖီလင်ကိုလေ။ တစ်ချက်နှစ်ချက် ဆက်တိုက်ဆောင့်သွင်းမှုကြောင့် နာကျင်စွာ ခါးကိုကော့မိချိန်မှာ လည်ချောင်းထဲကိုငပဲရှည်ရှည်ကြီးက တိုး တိုးဝင်လာတယ်။ ဒီအချိန် Daddy ရဲ့ပါးစပ်က ကျွန်တော့်ရွှေဥ တွေ့ထိ ကစားနေတာ။ သိပ်တော့မကြာဘူး..... မထိန်းနိုင်တဲ့ ကျွန်တော် မိနစ်အနည်းငယ်မှာပဲ Daddy ရဲ့ပါးစပ်ထဲ စိတ်လှုပ်ရှားစွာပန်းထည့်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြီးသွားမှန်းလည်းသိရော ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ပေါ် ပက်လက်လှဲစေလိုက်ကာ Daddy တို့သုံးယောက်ရဲ့ အလှည့် ကျသောင်း ကျန်းမှုကို ကျွန်တော် ခံစားရတော့တာပါပဲ။ အဲဒါကို ကျွန်တော်မုန်းတယ်၊ အသုံးချခံပစ္စည်းအသွင် သူတို့အလိုကျ ဆက်ဆံခံနေရတာ တွေကို မုန်းတယ်။ ဒါပေမဲ့....သည်းမခံနိုင် လောက်စွာ မုန်းနေစဉ်မှာပဲ ဒီလိုဆက်ဆံရတာကို သာယာစပြုလာတာ ဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့ အရိုက်ခံ နေရတာတွေကို ကျေနပ်စပြုလာတာ အစွမ်းကုန်နှိုးဆွခံရတာတွေကို ပျော်ရွှင်မိနေသလိုပဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာလည်း ဘယ်တုန်းကမှ ဒီလို မာတောင်ပြီး ကြီး ထွားနေတာ မဖြစ်ဖူးဘူး။
ပါးစပ်ကလည်း အားရပါးရ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်အော်မိရသလို သူတို့တွေကိုလည်း ကုတ်ခြစ် ထုရိုက်မိတယ် သဘောကျတယ်။ သူ တို့တွေ ကလည်း စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လှုပ်ရှားလိုက်ကြရင်း ရုတ်တရက် ကျွန်တော့်ကိုဆွဲထူလိုက်ကာ ဒူးထောက်ထိုင်စေပါတယ်။ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းတွေကို ခပ်ကျယ်ကျယ်ဟခိုင်းကာ သူတို့ကိုယ်စီဗုံတံခေါက်ကြပြီး သကာလ ဖြူပျစ်ပျစ်အရည်များစွာကို အလှည့်ကျ ပန်းထည့်ပါရော။ အား....Daddy အရည်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေ နှုတ်ခမ်းတွေ ရင်ဘတ်တွေပေါ် စီးဆင်းကုန်တာအများကြီးပဲ။
သူတို့စိတ်ကြိုက် ပန်းထုတ်ကြပြီးချိန်မှာတော့ တစ်ယောက်က ကင်မရာကိုသိမ်းဆည်း၊ တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုမြောက်ကနဲ ပွေ့ချီကာ ရေချိုးခန်းအပြင်ဘက် ခေါ်လာပါရော။ Daddy က ဘီရိုတံခါးကိုဖွင့်ပေးတော့ ကျွန်တော်ခပ်မြန်မြန် ပစ္စည်းတွေ အားလုံးယူကာ သွက်သွက်ဝတ်ဆင်ရတယ် အ၀တ်တွေ။
ကျွန်တော့် စိတ်ထဲနှုတ်ဆက်ရမလား? ဒီအတိုင်းထွက်ခွာရမ လား? ဝေခွဲမရဘဲ Daddy တို့ထိုင်နေတဲ့ဘက်ကို လှည့်ကြည့် လိုက်တော့ 'နက်ဖြန် ဒီအချိန်လောက် ငါတို့တိုက်ခန်းကိုပြန် လာခဲ့ကောင်လေး..။ မင်းသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဘယ် လောက်ကောင်းတယ် ဆိုတာပြမယ်'
ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ တံခါးကနေ ခပ်သွက်သွက်ထွက်လိုက်ကာ မဲမှောင်နေတဲ့ တိုက်ခန်းကနေ ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလာခဲ့တယ် လှေကားထစ် များမှတစ်ဆင့်။ ကျွန်တော့်ကားရှိရာဆီလှမ်းလာရင်း ကျွန်တော့်မျက်နှာ၊ ဆံပင်တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်မိ တယ်။ ပျစ်ချွဲချွဲအရည်တစ်ချို့ တွယ်ကပ်နေဆဲ။ 'ဝေါ့...ဝေါ့' ရေမြောင်းတစ်ခုနားသွားအန်လိုက်မိတယ်။ အားရသွားတော့မှသာ ကားကိုမောင်းထွက် အိမ်ကို ရွေ့လာမိ တော့တာပေါ့လေ။
ကားပြတင်းမှန်က တစ်ဆင့်လေပြည်လေးတွေ တိုးဝင်လာမှု ကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ပြန်လည်ကြည်လင်လာရတယ်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ တွေက ကျွန်တော့်အပြစ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပြုမူခဲ့တဲ့အရာရဲ့ ရလာဒ်ပါပဲ။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုဆက်ဆံခံရသလဲ....တန်ဖိုးမရှိစွာ ......အား.....။
အိမ်ဘက်သွားတဲ့လမ်းကိုအကွေ့ ကားနောက်ကြည့်မှန်က တစ်ဆင့် မြင်လိုက်ရတာကတော့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းများ.. ကျေနပ် အားရစွာ အစာဝနေတဲ့ ရွှင်မြူးရိပ်က အထင်းအရှားကိုဖြစ်လို့။
Alex Aung (6 October 2010)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂေးဖြစ်မှန်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? (Pa...